မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: December 2007
ထနြ်ူးမင့်အောင် -ိံစ်ြသစ်ကူး အမတ်ြတရ
အဝေးက၊ အနီးက၊ မဝေးမနီးကလုပ်ဖေၞကိုင်ဖက်တြေ အားလုံးသိုႛိံစ်ြသစ်ကူး အမတ်ြတရထနြ်ူးမင့်အောင်ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အေူပာင်းအလဲ ဆိုလိုႛဟောင်း္ဘပီးရင် ဟောင်းအဟောင်းတကာ့ အဟောင်းဆုံးတေထြဲမြာအကောင်းဆုံးလေးတေကြို ငၝ ကောက်ရခဲ့တယ်၊ရာူပည့်၊ တည်ုကည်၊ ဟန်နီ၊Claude၊ Jame၊ ဝေယံ၊ မော်မော်လမင်း၊ Smith၊ မိကောက်ဘယ်လို ဘုရားမဵြိးက ဖန်ဆင်း ထားတာပၝလိမ့်။ ငၝ ကကောင်မလေးရဲႛ အနမ်းတြေ အောက်မြာငၝ့ ဘ၀ ထမင်းပြဲကို ခူးခပ်ူပင်ဆင်နေတုန်းစစ်မီး ထ တောက်တော့ဗုံး ကဵည်ဆံတြေုကားမြာငၝ့ သီခဵင်းတြေ ခမဵာအသံ တူခား စာသား တူခားအကုန်လုံး ဆြံအ သြားတယ်။ ကံကောင်းလိုႛ ငၝ မသေတယ်ပစ်နေ ခတ်နေတဲု့ကားကကယ်ဆယ်ရေး ပုခက် ပေၞမြာအူဖရြောင် တနဂဿေိံဝြတ်ူပြ ဆုတောင်းပြဲမဵားမေလရဲႛ ၂၇ရစြ် ဂဏန်းမဵားလောင်စာဆီ စေဵိးံနြ်းရေဒီယို ၄ လုံးရေဝြၝရောင် လိငြ်းလုံးဋ္ဌကီးမဵား။ တိုးတိုး တိတ်တိတ် သာ ရတ်ြဆိုခငြ့် ရြ္ဘိပီးကဵယ်ကဵယ် လောင်လောင်ူမည်ဟီး တတ်တဲ့သူမရဲႛ အမည် နာမမီူးပင်း တိုက်ထားပေမဲ့ဂုဏ်သတ္ဇိတြေေူပာင်း မသြားတဲ့ငၝ့ရဲႛ မိုက်ဖေၞ မိုက်ဖက်တေငြၝ ဦးင်္ီတ်ြပၝ၏မလုံလောက်သေးဘူး ထင်လိုႛငၝ့ ခိံ္ဌာတခုလုံးကို ကိုင်းင်္ီတ်ြပၝ၏ထပ်လိုအုန်းမယ် ထင်လိုႛငၝ့ ရြေႛဘ၀ နောက်ဘ၀ မဵားစြာကိုပၝကိုင်းင်္ီတြ် လိုက်ပၝ၏။ ။၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁သန်းခေၝင်ယံ (ူပည်တငြ်းက ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားလူငယ် တဦးရဲႚ အမတ်ြတရကဗဵာ)
Reactions: မောင်စမြ်းရည် - အတု နဲႛ အစစ်
အတု နဲႛ အစစ်မောင်စမြ်းရည်ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အစိုးရ .. အတုရဲႚစစ်တပ် အတုကသံဃာအတုကို ခေဵမနြ်းရာ ။ သံဃာထုတငြ်းပစ်သငြ်းကဵည်ဆန်မန်ြခဵင်ရာကို မန်ြကဵည်ဆန် အတု မဟုတ်ပၝ။ ။ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ လမ်းစဉ် ၂ ခုမောင်စမြ်းရည် ထောင်သောင်းသံဃာဝင်းဝၝ စီတန်းအုကမ်း မဖက်လက်နက် မပၝမေတ္ဇာပိုႛုကအဟိံသဗုဒ္ဌလမ်းစဉ်ပၝ။ စိမ်းမြောင် စီတန်းစစ်သားတန်းကသြေးလမ်း ခင်းမာရ်နတ်မင်းရဲႚ လမ်းစဉ်သာ။ ။ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၀
Reactions: မာမာအေး - ဒီဇင်ဘာ အလမြ်း
ဒီဇင်ဘာ အလမြ်းမာမာအေးဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ခဵမ်ူးမိံငြ်းဖြေးတကိုယ်ရေးဋ္ဌကံနြိမ့်တုံမင့်တုံခမ်းဘုံ ဘာဝစိတ္ဇဇတေတြသ လငြ့်မေဵာအတောမသတ် "ဒီဇင်"ူဖတ်သော်"ခရင်္စမတ်" နေႛတနေႛတုန်းကရနြ်းပ တြဲယူုကင်သူလက်တြဲပြဲ မဂဿလာရက်မဟာလည်းကိုယ်ထည်းတယောက်တခေဵာက်ခေဵာက်ိံငြ့်လမ်းပေဵာက်နေဆဲရစ်ဝဲ၀ဲတည်း။ လြိက်လြဲ ဆြေးေူမႛသည်မေ့ ရင်မြာအုကင်နာတေလြာပၝ ယူပၝမ္တွဝေပၝလဵက်ထားရက် ပစ်ရက်နေရက်လေူခင်းေူဖူခင်းမလအြနိင်္စ … အနတ္ဇ ပၝတကား။ ။ ၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၀၇
Reactions: မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ - ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇
မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇သတင်းတိုထြာ နဲႚ သီခဵင်းပဒေသာဒေၝက်တာအောင်ခင်၊ ရေဒြေၝင်ူးဖြ၊ သီးလေးသီး အူငိမ့်မင်းသမီးမဵာိးံငြ့်ိံစ်ြသစ်ကူိးံငြ့် လတ်ြလပ်ရေး အမတ်ြတရ အစီအစဉ်မဵားဦးပန်တဵာ၊ ခင်သက်ပန်၊ိံငြ်ူးမတ်ခိုင် နဲႚ နန်းဖောဆေး စီစဉ်သည် Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: ကိုရီးယားကူမန်မာကေဵာင်းသားကိုထောက်ပံ့မည်
ကိုရီးယားကူမန်မာကေဵာင်းသားကိုထောက်ပံ့မည်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၇ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ တောင်ကိုရီးယားမြ C&KCL ကုမဍ္ဎဏီသည်ူမန်မာကေဵာင်းသားအခဵြိႛအား ၂၀၀၈ခိုံစ်ြမစြ၍ ပညာသင်ေုကးမဵား ထောက်ပံ့သြားမည်ဟု သိရြိရသည်။ ပင်လယ်ကူးသဘေဿာလုပ်ငန်ိးံငြ့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမဵား လုပ်ကိုင်နေသော အဆိုပၝ ကုမဍ္ဎဏီက ရန်ကုန်္ဘမြိႛ ရေေုကာင်းသိပဍ္ဎံတက္ကသိုလ် (IMT) မြ ကေဵာင်းသားမဵားကို ထောက်ပံ့သြားမည်ူဖစ်္ဘပီး၊ တစ်ိံစ်ြလ္တွင် ကေဵာင်းသား ဦးရေ ၂၀ိံနြ်ူးဖင့်ိံစ်ြစဉ်ထောက်ပံ့မည်ူဖစ်ေုကာင်း ကုမဍ္ဎဏီဥက္ကဌ မင်္စတာယီဂမ်ူးဖြိ၏ေူပာုကားခဵက်ကို ကိုးကား၍ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့ထုတ် တောင်ကိုးရီးယာိးိုံင်ငံ သတင်းစာမဵားတငြ် ရေးသား ဖေၞူပထားသည်။ ကုမဍ္ဎဏီ၏ ပညာသင်ထောက်ပံ့ေုကး အစီအစဉ်မဵာိးံငြ့် ပတ်သက်၍ ရေေုကာင်းသိပဍ္ဎံတက္ကသိုလ် ကေဵာင်းအုပ်ဋ္ဌကီး ဦးဝင်းသိန်ိးံငြ့် C&KCL ကုမဍ္ဎဏီတိုႛ ရန်ကုန်တငြ် သဘောတူညီမြ လက်မတ်ြရေးထိုးခဲူ့ပီူဖစ်ေုကာင်းလည်း ရေးသားဖေၞူပထားသည်။ ၁၉၉၈ခိုံစ်ြတငြ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော အဆိုပၝ ကုမဍ္ဎဏီပိုင် သဘေဿာမဵားတငြ်ူမန်မာသဘေဿာသား ၃၀၀ ခန်ႛ တာဝန် ထမ်းဆောင်လဵက်ရိသြည်။ ၂၀၀၄ခိုံစ်ြမစြ၍ ကုမဍ္ဎဏီသည် ရန်ကုန်တငြ် ရေေုကာင်းသိပဍ္ဎံတက္ကသိုလ် (IMT)ိံငြ့် ပူးပေၝင်း၍ အားကစားပြဲမဵာူးပလြုပ်ပေးခဲ့ေုကာင်း၊ ကုမဍ္ဎဏီတငြ် အလုပ် လုပ်နေသောူမန်မာသဘေဿာသားတိုႛ၏ မိသားစုမဵားကို ဖိတ်ခေၞူပီး တြေႛဆုံပြဲမဵာူးပလြုပ်ပေးခဲ့ေုကာင်း သိရသည်။ ၁၉၆၃ မြ စတင်၍ ရေေုကာင်းပညာသိပဍ္ဎံ၏ ကနဦးသင်တန်းမဵားကို ဖငြ့်လစ်ြခဲူ့ခင်ူးဖစ်ူပီး၊ ယခုအခဵိန်ထိ ရေေုကာင်းသိပဍ္ဎံ အင်ဂဵင်နီယာပေၝင်း ၁၃၀ ၀၀၀ (တစ်သိန်းသုံးသောင်း) မြေးထုတ်ပေးခဲူ့ပီူးဖစ်သည် ဟု သိရြိရသည်။ ပိုႛဆောင်ရေးဝန်ဋ္ဌကီးဌာန၏ ရေေုကာင်းပညာကေဵာင်းသည် လန်ြခဲ့သည့် ၃ိံစ်ြက ရေေုကာင်းသိပဍ္ဎံတက္ကသိုလ်( Institute of Marine Technology )အူဖစ်ေူပာင်းလဲခဲ့သည်။(ဓာတ်ပုံ- Ministry of Transport)
Reactions: အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်း - သတင်းသမားတေအြတကြ် ၊ ထောင်တန်တဲ့စာအုပ်
မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစမဵားသတင်းသမားတေအြတကြ် ၊ ထောင်တန်တဲ့စာအုပ် အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်းဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ သတင်းသမားတေအြတကြ်ူပည်ပရောက်ူမန်မာူပည်သား သတင်းသမားမဵားအတက်ြဆ္ဘိုပီး စာအုပ်တစ်အုပ် ထက်ြန္ဘေပီလိုႛ သိရပၝတယ်။ စာအုပ်နာမည်က "သတင်းသမား အမြားတစ်ထောင်" မဟုတ်ပၝဘူး။ "သတင်းသမား သတိထားစရာူမန်မာစိာံငြ့် စကားသံမဵား" ပၝတဲ့ခင်ဗဵာ။ ကဲ … စာအုပ်ကို ဘယ်မြာ ၀ယ်ရမလဲ။ စာရေးဆရာမ မ္ဘေငိမ်းရဲႛ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံမြာတော့ … " … မြာလိုႛရပၝတယ်။ maynyane@gmail.com ကို မြိာုိံင်ပၝတယ်။ …" လိုႛ ရေးထားပၝတယ်။ ဟင့်အင်း၊ မစောင့်ိုိံင်တော့ဘူး၊ ဖတ်ခဵင်လ္ဘြပီ ဆိုသူမဵား အနေနဲႛ "http://www.4shared.com/file/30390598/8d2364d9/CE_BM_Text_Final.html ဆိုတဲ့ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံကို ရောက်အောင် သြား္ဘပီး ကိုယ့်ကနြ်ူပတြာထဲ ဆဲယြူသိမ်းဆည်း၊ ဖတ်ရြ လေ့လိာိုံင်ပၝ္ဘပီ။ စာအုပ်ရဲႛ အစမြာ "စာရေးဆရာမ မ္ဘေငိမ်းက ရေးသာူးပစြုသည်။ စာရေးဆရာ မောင်သာမညက ကူညီ တည်ူးဖတ်သည်။" လိုႛ ရေးသားထားတာ တြေႛရမြာပၝ။ စုစုပေၝင်း ၆၂ မဵက်ြိာံရိပြၝတယ်။ူမနမာသတင်း သမဂ္ဂက ထုတ်ဝေပၝတယ်။ - ဝေၝဟာရအမြား- အသံထက်ြအမြား - စာလုံးပေၝင်းသတ်ပုံအမြား- သဒ္ဋၝအမြား ဆ္ဘိုပီး အခန်းခြဲူပစြုထားပၝတယ်။ "ဘာသာစကားအားနည်းမြေုကာင့် အရည်အသြေးလေဵာ့ပၝးနေသော သတင်း အခဵက်အလက်မဵားကို မီဒီယာမဵားတငြ် မတြေႛခဵင်အဆုံး တြေႛနေရသည်။ မုကားခဵင်အဆုံုးကားနေရသည်။" လိုႛ စာအုပ်အမြာစာမြာ ညည်းခဵင်းခဵ ထားပၝတယ်။ "သဒ္ဋၝရေးထုံူးဖစ်စေ၊ ဝေၝဟာရအသုံးအိံနြ်ူးဖစ်စေ၊ သတ်ပုံဖစ်စေ၊ အသံထကြ်ူဖစ်စေ တစုံတခု မြားယငြ်းခဋ္ဋတ်ခေဵာ်လ္တွင် သတင်းအခဵက်အလက်၏ အရည်အသြေးမဵား လေဵာ့ပၝးသြားပၝသည်၊၊ သဒ္ဋၝမြားလ္တွင် တရားလိုက တရားခူံဖစ်သြာိးိုံင်သည်၊၊ ဝေၝဟာရမြားလ္တွင် မရည်ရယ်ြဘဲ ဆဲသလိုဖစ်သြာိးိုံင်သည်၊၊ သတ်ပုံမြားလ္တွင် အဓိပဍ္ဎၝယ်တက်တက်စင် လြဲသြာိးိုံင်သည်၊၊ အသံထက်ြမြားလ္တွင် လေးနက်သောစကားသည် ရယ်စရာူဖစ်သြာိးိုံင်သည်၊၊ … … … ဤစာအုပ်သည် သတင်းသမားတိုႛအတကြ်ူမန်မာစာူမန်မာစကားကို တိတိကဵကဵ ရေးသားေူပာဆိုိုံင်ရန် အကူအညီပေးမည့် စာအုပ်တအုပ်ူဖစ်ပၝသည်၊၊" လိုႛလည်း ဆိုထားပၝတယ်။ သတင်းသမားတေသြာမက စာသမား၊ ပေသမား အတော်မဵားမဵား လည်း ကေဵာင်းစာမေးပဲတြေမြာူမန်မာစာ အမတြ် ၄၀ ကေဵာ်နဲႛ အောင်ူမင်ခဲု့ကသူတြေူဖစ်တာေုကာင့် ဒီစာအုပ်ကို ၀ယ်ုက၊ ကနြ်ူပတြာဘေးနား ခဵထာုးက၊ အင်တာနက်ကနေ ဆဲယြူုက္ဘပီး ကိုးကာုးကမယ်လိုႛ ယူဆပၝေုကာင်း။ "အဲန်အယ်လ်ဒီ" ဆိုတဲ့ အသုံးအိံနြ်းမဵြိးနဲႛ ပတ်သက်လိုႛတော့ ဒီစာအုပ်ထဲမြာ မတြေႛရပၝဘူး၊ စာအုပ်ကို ဒုတိယအဋ္ဌကိမ်၊ တတိယအဋ္ဌကိမ်ူပန်လည်ရိုက်ြိံပ်ဖိုႛူဖည့်စကြ်ူပစြုတဲ့အခၝ ဒီ "အဲန်အယ်လ်ဒီ" ကိုလည်း ထည့်သငြ်းစဉ်းစားမယ်လိုႛ ယူဆရပၝတယ်။ ထောင်တန်တဲ့စာအုပ် မမ္ဘေငိမ်းရဲႛ စာအုပ်ကို အင်တာနက်ကနေ ဖတ်ရ္ဘြပီးသကာလ စိတ်ဓာတ်ကဵမိပၝတယ်၊ ငၝတိုႛတြေူမန်မာစာ၊ူမန်မာစကားကို တရုတ်စကား၊ ကိုရီးယားစကား၊ အဂဿလိပ်စကားတိုႛလောက်တောင် ဦးစားမပေးမိပၝလား လိုႛ တြေးမိပၝတယ်။ သိုႛပေသော်လည်း ၂၀၀၈ခိုံစြ် ဇန်န၀ၝရီလထုတ် ခဵယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊ စာမဵက်ြိာံ ၁၃၆ မြာပၝတဲ့ စာအုပ်ေုကာ်ူငာကို တြေႛလိုက်ရတော့ မြားတတ်တာ ငၝတိုႛခဵည်းပဲမဟုတ်ဘူးဟေ့ ဆ္ဘိုပီး စိတ်ဓာတ်တြေူပန်လည် တက်ုကလြာပၝတယ်။ူမန်မာူပည်ထဲက ဆရာမဵားလည်း သဒ္ဋၝအမြားနဲႛ ပၝကလား။ စာအုပ်နာမည်က "ရုပ်တုမြေူပာသောူမန်မာ့သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိလ်ြထူးမဵား" တဲ့။ စာအုပ်ခေၝင်းစဉ်က သဒ္ဋၝမြားနေ (ဂရာမာမြားနေ) တာေုကာင့် စာအုပ်ထဲကအခဵက်အလက်တေကြရော မန်ြပၝ့မလားလိုႛ စောဒကတက်မိရင် အမြာူးမင် အဲ အဆိုးမင်ဝၝဒီူဖစ်သြားမယ် ထင်ပၝတယ်။ သဒ္ဋၝရေးထုံး မြားယငြ်းခဋ္ဋတ်ခေဵာ်မြေုကာင့် သတင်းအခဵက်အလက်ရဲႛ အရည်အသြေး လေဵာ့ပၝးတယ် လိုႛ မမ္ဘေငိမ်ူးပစြုတဲ့ စာအုပ်အမြာစာက ဆိုထားတာကိုပန်သတိရမိပၝတယ်။ အူပစ်တင်မယ်ဆိုရင် စာအုပ်တိုက်က အယ်ဒီတာ၊ စာပေစိစစ်ရေး ရုံးက ကေဵးဇူးရင်ြမဵားကိုလည်း တင်သင့်ပေတာပေၝ့။ ကဵနော့်ကိုလည်း အူပစ်တင်ုကမယ်ထင်ပၝရဲႛ။ ဒီငနဲ စာအုပ်အေုကာင်း လိုရင်းမေူပာဘဲနဲႛ မယောင်ရာဆီလူးနေတယ်၊ ဒၝ ... သဒ္ဋၝစာအုပ် မဟုတ်၊ သမိုင်းစာအုပ် ဆ္ဘိုပီး။ ကဲ … လိုရင်းေူပာရရင် ဗိုလ်ခဵပ်ြအောင်ဆန်း၊ ဦးဝိစာရ၊ ဦးဥတ္ဇမ၊ ဆရာစံ၊ မဟာဗိံ္ဌလြ၊ အနော်ရထာ၊ ကနောင်မင်းသား၊ ဒေၞဦးဇနြ်း စတဲ့ ရုပ်တုတေရြဲႛ သမိုင်းစာမဵက်ြိာံတြေ ပၝ၀င်တယ်၊ ကံ့ကော်ဝတ်ရည်စာပေကူဖန်ႛခဵိတယ်၊ ဒုတိယအဋ္ဌကိမ်ထုတ်ဝေတယ်လိုႛေုကာ်ူငာက ဆိုပၝတယ်။ မဵက်ြိာံဖုံးမြာတော့ ဗိုလ်ခဵပ်ြအောင်ဆန်ူးမင်းစီးရုပ်တုပုံကို သုံးထားပၝတယ်။ ၂၀၀၀ူပည့်ိံစ်ြတုန်းကလည်း ဒီစာအုပ်ကို ဒုတိယအဋ္ဌကိမ်ထုတ်ဝေဖိုႛ စီစဉ်ခဲ့ပၝသေးတယ်။ စီစဉ်ဆဲမြာပဲိုိံင်ငံတော်က ဆရာသန်းဝင်းလိင်ြကို ဖမ်းဆီြးိံပ်စက်္ဘပီး ထောင် ၇ိံစြ် ခဵခဲ့တာပၝ။ ဒီိံစ်ြဆန်းပိုင်းမြိာုိံင်ငံတော်က ဆရာ့ကိုပန်လတ်ြပေးပၝတယ်။ အခုတောိုိံ့င်ငံတော်က ဒီစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခငြ့်ူပလြိုက်ပၝ္ဘပီ။ိုိံင်ငံတော်ရဲႛစေတနာေုကာင့် ကဵနော်မဵြိးဋ္ဌကီးတိုႛလည်း သိသင့်၊ သိထိုက်၊ လေ့လာထိုက်တာတေကြို ဖတ်ရြိုိံင်ုက္ဘပီပေၝ့။ိုံင်ငံတော်ရဲႛ ကေဵးဇူးတြေ ဋ္ဌကီးမားလေစြ။
မဵြိးဆက်သစ် လူငယ်မဵား အစည်းအရုံးေုကညာခဵက်ထုတ်ူပန်
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား သတင်းများ ထုတ်ပြန်၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ မိသားစုများက စစ်အာဏာပိုင်တို့ကို တရားပြန်စွဲမည် ဟုဆိုမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ သြဂုတ်လ လောင်စာဆီသပိတ်နှင့် စက်တင်ဘာ သံဃာ့အရေးတော်ပုံ အတွင်းက ဖမ်းဆီးထားသော ကျောင်းသား၊လူငယ်များ နှင့် ရဟန်းသံဃာများ၏ ထောင်တွင်း နှင့် တရားရုံးထုတ် အခြေအနေများကို ယခု ပြည်တွင်းတွင် လှုပ်ရှားနေသော မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် - ကိုကျော်စိုး နှင့် ကိုလှမျိုးနောင်တို့၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကို စိုးရိမ်ကြောင်း၊ ကိုမြင့်လွင်ဦး (ကိုသားကြီး)၊ ကိုကျော်စွာဌေး၊ ကိုထွန်းထွန်းနိုင် နှင့် ကိုအောင်မင်းနိုင် တို့ကို ရုံးထုတ်ခြင်း၊ ပုဒ်မတပ်ခြင်း နှင့် ရုံးချိန်း သတ်မှတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြောင်း၊ ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်မှ သံဃာတော် ၅ ပါး ဖြစ်သည့် ဦးနန္ဒ၊ ဦင်္းအဂ္ဂဓမ္မ၊ ဦးအိန္တရိယ၊ ဦးဇာဏိရ နှင့် ဦးလာသက တို့ကိုလည်း ပုဒ်မ ၅၀၅/ခ၊ ၂၉၅၊ ၁၄၃ တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုကြောင်း ပါရှိသည်။ သို့သော် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ရှေ့နေချုပ်များ၊ တရားသူကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူအချို့အား ရုံးမထုတ်ရန်နှင့် တရားဝင် ပုဒ်မတပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြကြောင်း သတင်းထွက်လာပြီးနောက်တွင် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သော ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး နှင့် ဌေးကြွယ်တို့ကလည်း ၄င်းတို့၏ သဘောထားများကို ထုတ်ပြန် အသိပေးလိုက်ကြောင်း ထိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် မြန်မာပြည် ဥပဒေများအရ အထိမ်းသိမ်းခံရသူတဦးကို ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း တရား ဥပဒေအရ တရားရုံးတင် စွဲချက်တင် အရေးယူရန်နှင့် ထို့ရက်ထက်ပိုပြီး အကြောင်းခိုင်လုံမှု မပြနိုင်ဘဲ ဖမ်းဆီးထားခြင်း မပြုရန်ဟု ဆိုထားကြောင်း၊ ယခုလို မတရား ဖမ်းဆီးထားသည့်အတွက် မိမိတို့မိသားစုများက စစ်အစိုးရကို ပြန်လည် တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ကို တရားစွဲဆိုမည် ဆိုပါကလည်း အများပြည်သူရှေ့မှောက်တွင် ဥပဒေကြောင်းအရ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သို့မဟုတ်ပါက မိမိတို့က လက်မှတ်ထိုးပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံးက ပြည်သူတို့ထံသို့ သတင်းမှန်များ အမြန် ရောက်ရှိရေးကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ စစ်အစိုးရက ယခုအချိန်အထိ် သတင်းများ မှောင်ချ၊ ထိမ်ချန်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ နှင့် သံဃာတော်များကို နှိပ်စက်ညှင်းပမ်း နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: စကဿာပူရောက် သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံဝိုင်းတော်သားမဵာိးံငြ့် ဦးပန်တဵာ စကားလက်ဆုံ
စကဿာပူရောက် သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံ ၀ိုင်းတော်သားမဵာိးံငြ့် ဦးပန်တဵာ စကားလက်ဆုံမိုးမခ (ဆစ်ဒနီ)ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဉ် နားဆင်ရန် ဒီမြိာိံပ်ပၝ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: ဆစ်ဒနီူမြိႚူမန်မာစာသင်တန်းကေဵာင်း ၁၈ုကိမ်ေူမာက် အထိမ်းအမတြ်
ဆစ်ဒနီူမြိႚူမန်မာစာသင်တန်းကေဵာင်း၁၈ုကိမ်ေူမာက် အထိမ်းအမတ်ြဒေၝက်တာ သန်ိးိုံင်ိံငြ့် စကားဝိုင်းမိုးမခ (ဆစ်ဒနီ) မြ ဦးပန်တဵာ တြေႚဆုံသည်ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဉ်နားဆင်ရန် ဒီမြိာိံပ်ပၝ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
ဇာဂနိာံငြ့် သီးလေးသီး ရဲႚ ဆေးရောင်စုံ အူငိမ့်ူပက်လုံးခင်ြမဵား
ဇာဂနာ နှင့် သီးလေးသီး ရဲ့ ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့် ပြက်လုံးခွင်များဇာဂနာဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ စိန်သီး။ ။ အရွှမ်းမဖောက်ဘဲ ခွန်းထောက် ဆိုသွားတာ ညီလေးပန်းသီး မှတ်တယ် ပန်းသီး။ ။ ဟုတ်ပ … အကိုစိန်သီး ခင်ဗျ။ စိန်သီး။ ။ ကျနော်တို့တွေ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံခြားမှာ အငြိမ့်ကရတာ ပါပဲ။ ဒီက အကိုတော်၊ အမတော်များက ဖိတ်ကြားတော့ သူတို့ ကျေးဇူးနဲ့ ရောက်ရတာပါ။ ကြယ်သီး။ ။တစ်သက်နဲ့ တကိုယ် အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးတဲ့ လေယာဉ်ပျံကြီး ခုမှ စီးဖူးတော့တယ်။ ဂေါ်ဇီလာ။ ။ ခေတ်ကာလရဲ့ တိုးတက်မှုပေါ့ကွာ။ မြေကြောတွေ ရှုံ့ သွားပြီ၊ စင်္ကာပူ ရန်ကုန် လာတာ … ရန်ကုန် - မန္တလေး ထက်တောင် မြန်သေး။ ဇီးသီး ။ ။ ခေတ်က တိုးတက်လာပြီကိုး၊ အရင်က စာရေးတယ်၊ နောက်တော့ ဖုန်းဆက်တယ် ခုတော့ အီးမေးလ် ပို့တယ်၊ အပြောင်းအလဲတွေ သိပ် မြန်လာပြီ။ စိန်သီး။ ။ ဟုတ်တယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ခေတ် ကလေးတွေ သင်ပုန်းကြီး ဖတ်စာတောင် ခေတ်နဲ့ အညီ ပြောင်းလဲနေပြီ။ ပန်းသီး။ ။ ဘယ်လိုများတုန်း။ စိန်သီး။ ။ ဟိုတုန်းက ဇွန်ပန်းရုံအနီး လှည်းဘီး နွံထဲ ကျွံနေသည်၊ ကူပြီး တွန်းပေးကြပါ၊ လေးလွန်းလို့ မတွန်းနိုင်ဘူးလား၊ ပြိုင်တူ တွန်းလျင် ရွေ့ နိုင်ပါသည် … တဲ့။ ဟော … ခု … ပြောင်းသွားပြီ။ ပန်းသီး။ ။ ဘယ်လို ပြောင်းသွားတုန်း။ စိန်သီး။ ။ ရယကအိမ်အနီး ဖဲဝိုင်း ထောင်နေသည် ကူပြီးဖမ်းပေးကြပါ၊ အချင်းချင်းမို့ မဖမ်းချင်ဖူးလား၊ ပြိုင်တူ ဖမ်းလျင် မိနိုင်ပါသည် … တဲ့။ ကဲ … ပန်းသီး။ ။ အောင်မာ … ဒါဆို ငါလည်း ပြောချင်ပါ့ဗျာ။ ပြောင်းလဲသွားပုံ ကလေး ကြယ်သီး။ ။ ပြောစမ်းပါဦး … ပန်းသီး။ ။ စောစောထ … သွားတိုက် မျက်နှာသစ် … အစာစား အ၀တ်လဲ … အိပ်ယာသိမ်း အိပ်ယာခင်း … ပြန်အိပ် အိပ်ရာထ … သွားတိုက် မျက်နှာသစ် …. အစာစား ပြန်အိပ် … အိပ်ယာထ … ဂေါ်ဇီလာ။ ။ ငါ့သား … မင်း ဒီနေ့ ကျောင်းကော သွားဦးမှာလား။ ပန်းသီး။ ။ အဖေတို့ ပိုက်ဆံ ကုန်ပါတယ်။ ဂေါ်ဇီလာ။ ။သြော် … ရှာပါ့မယ်ကွာ။ ပန်းသီး။ ။ ဆရာမ ဈေးဖိုး၊ တံပျက်စည်းဖိုး၊ ဆရာမသမီး ကျုရှင်ဖိုး၊ ကျောင်းအုပ်ကြီး ကာရာအိုကေ ဆိုဖို့ … အဲဒါတွေ ပေးနိုင်လို့လား။ ဂေါ်ဇီလာ။ ။ ငါ့သား ဆယ်တန်း အောင်ရင် ပြီးရော … ပန်းသီး။ ။ ဆယ်တန်း အောင်တော့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဂေါ်ဇီလာ။ ။ ဘွဲ့ ရအောင် ဆက်သင်ပေါ့။ ပန်းသီး။ ။ဘွဲ့ ရတော့ရော … ဂေါ်ဇီလာ။ ။ အင်း … အင်္ဂလိပ် စကားပြောသင်တန်း တက်ပေါ့။ ပန်းသီး။ ။ အဲဒါ တတ်တော့ကော … ဂေါ်ဇီလာ။ ။ အင်း … အဲ … ကွန်ပျုတာ တက်ပေါ့ … ပန်းသီး။ ။ အဲဒါ တတ် တော့ရော … ဂေါ်ဇီလာ။ ။ ဟာ … ငါ့သားရယ်၊ ဒီလောက်တောင် တတ်နေမင့်ဟာ ဆိုက်ကားသာ နင်းစားတော့ ပေါ့ကွာ။ (၀ိုင်းရိုက်) ဂေါ်ဇီလာ။ ။ ဟုတ်ပ … ငါ့ ဘာပြောရတော့မလဲ။ ခေတ်က တိုးတက်နေပြီ။ ဒီ မလေးရှားမှာ ပရိုတွန် ကားတွေ ထုတ်တယ်။ ကိုးရီးယားက ဟွန်ဒိုင်း။ ဟော … ငါတို့ မြန်မာက မြန်မာ ဆလွန်း ထုတ်ပြီ ဗျား။ ဇီးသီး။ ။ တယ်ဟုတ်ပါလား ဂေါ်ဇီလာ။ ။ ကားတစ်စင်းလုံး … စတီယာရင် မပါဘူး၊ ဂီယာ မပါဘူး၊ ဘရိတ် မပါဘူး။ ပန်းသီး။ ။ ဘယ်လို မောင်းလဲ … ဂေါ်ဇီလာ။ ။ အသံနဲ့ အမိန့် ပေးရတာ။ မောင်းဆို ကားက ထွက်ရော၊ မြန်ဆို အရှိန် တင်လာရော၊ ညာကွေ့ဆို ကွေ့တယ်၊ ရပ်ဆို ရပ်တယ်၊ ကားထဲက ကက်ဆက်ကိုလည်း အမိန့်ပေး ခိုင်းတာ။ သီချင်းကြီး ဆို “မြမန်းဂီရိ သေလာတောင်” ဆိုပြီး အသံ ထွက်လာရော။ ငါက လေးဖြူ လို့ ပြောလိုက်ရင် ကက်ဆက်က အလိုအလျောက် “အလင်းရောင် … သန်းကောင်ယံ ညဉ့်နက်ထဲ” ဆိုပြီး အသံ ပြောင်းသွားရော။ အဲဒီတုန်း နောက်က ကားက ဟွန်း အကျယ်ကြီး တီးပြီး ကျော်တက်တော့၊ ငါ စိတ်ဆိုးပြီး “ချေးထုပ် တွေ ခွေးသူခိုး …” လို့ ဆဲ လိုက်တာ၊ ကက်ဆက်က သီချင်း ပြောင်းသွားတယ်။ စိန်သီး။ ။ ဘာ သီချင်း လဲ ဂေါ်ဇီလာ။ ။ နိုင်ငံတော် ပြိုကွဲမဲ့ အခြေအနေ ကို တို့ လက်မခံ နိုင်ပါ … တဲ့။ အားလုံး။ ။ ဟာ … ... … (ဇာဂနာ စာကြွင်းများ - ) ကြားပေါက်လေး တခု တွေးမိတာလေး ရေးပါရစေ။ ကျနော်တို့ ဆေးကျောင်း ရောက်ကာစ က ဖားခွဲ ရပါတယ်။ ဦးထွန်းမောင် ဆိုတဲ့ ကုလားကြီး ဆီကနေ ဖားအရှင် ၃ကောင် တရာ နဲ့ ၀ယ်ရတာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဖားတွေကို ပုံ မပျက်အောင် ကျွက်ကျွက်ဆူ နေတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်ပြီး သတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က ဘာ သိမလဲ။ ဖားတွေကို ရေနွေးအိုးကြီးထဲ ပစ် ထည့် လိုက်တာ ကိုယ်တော်ချောတွေက ဆတ်ကနဲ ရေနွေးကို ခြေထောက်နဲ့ တစ်ချက်ပဲ ထိပြီး ခုန် ထွက် သွားလိုက်တာ ၃ ကောင်လုံး လွတ်သွားရော။ ကုလားကြီးက ရယ် သလေ့။ ဒီလို သတ်ရတယ်ကွ … တဲ့ ဆိုပြီး ရေအေးတွေထည့်၊ ဖားကို ရေအေး ဇလုံထဲ ထည့် လိုက်တာ၊ ရွှေဖားလေးတွေက ရေအေးကန်ထဲ ပျော်လို့ ကူးခတ် နေလိုက်တာ။ ဒီမှာတင် ကုလားကြီးက အပူချိန်ကို ဖြေးဖြေးချင်း တရစ်ချင်း တိုး လာလိုက်တာ၊ ငါး ဒီဂရီ လောက် တိုးတော့လည်း ဖားလေးများ ကူးခတ်ဆဲ၊ နောက်ထပ် ငါး ဒီဂရီ ထပ်တိုးလည်း သူကောင့် ဖားတွေက နေသာသေးတယ် ဆိုပြီး ကူးခတ်ဆဲပ၊ဲ အပူချိန် ၆၀ လောက်လည်း ရောက် ရော ဖားတွေ မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ရှစ်ဆယ် လောက်လည်း ရောက် ရော အားလုံး … ဂန့် … ဂန့် … ဂန့် … ဂန့်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ခုတော့ ဒီ ၀ဋ်တွေ လည်ပါပြီ။ တရစ်ချင်း တရစ်ချင်း ကျပ်လာပြီ။ ငါတို့တော့ နေလို့ ရသေးတယ်။ ဘာမှ မဖြစ်သေးဖူး ဆိုပြီး … ဆက်ပြီး ကူးမှာလား၊ ခုန် ထွက် မှာလား။ အပူချိန်မြှင့်နေတဲ့ လက်ကို ပြေး ကိုက် ကြမလား။ မျက်နှာကို ခုန်အုပ် ကြမလား။ တခုခုတော့ ဆုံးဖြတ် ရတော့မှာပဲ။ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လည်း ဖြစ်အောင် လုပ်ရတော့မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ရေနွေးအိုးထဲ သေရတာ သိပ် မတန် လှပေဘူး။(သီးလေးသီး စင်္ကာပူ တြေႚရစဉ်)
Reactions: အရငြ်ဥာဏိင်္ံရ တရားပြဲသတင်းေုကးမုံက ဖေၞူပပေး
အရငြ်ဥာဏိင်္ံရ တရားပြဲသတင်းေုကးမုံက ဖေၞူပပေးမိုးမခ (ရန်ကုန်)ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ တရားပြဲမဵာူးပလြုပ်ခငြ့် မူပတြော့ဘူးလိုႚ သတင်းမဵား ပေၞထက်ြနေခဵိန်မြာပဲ ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ထုတ်ေုကးမုံ သတင်းစာက သီတဂူ ဆရာတော် အရငြ် ဥာဏိင်္ံရရဲႚ တရားပြဲ သတင်းတပုဒ်ကို ဖေၞူပ ပေးလိုက်ပၝတယ်။ လာမယ့် ဇန်န၀ၝရီလ ၂ ရက်နေႚ မိံ္ဇလေးတိုင်း၊ ကေဵာက်ပန်းတောင်ူးမြိႚ၊ူမြိ့ နယ်အားကစားကငြ်းမြာ ဆရာတော် တရားမဵား ဟောုကားဖို့ ရြိေုကာင်း အစိုးရပိုင်ေုကးမုံ သတင်းစာက ဖေၞူပပေးတာူဖစ်ပၝတယ်။ ရန်ကုန်မြာတော့ တရားပြဲမဵား ပိတ်ပင်ေုကာင်း သတင်းမဵား ထက်ြပေၞနေူပီး၊ အခဵြိႚကတော့ တရားပြဲမဵားကို ပိတ်ပင်ူခင်း မရြိေုကာင်းနဲႚ ဒေသခံ ရပ်ကက်ြအာဏာပိုင်မဵားကိုသာ စစ်အစိုးရက တရားပြဲမဵာူးငိစနြ်းမရြိရင် အရေးယူခံရမြာူဖစ်ေုကာင်း၊ တစ်ဘက်လညြ့်နဲႚ ဖိအားပေူးခိမ်းေူခာက် တာူးမစ်တာူဖစ်ေုကာင်းေူပာဆိုပၝတယ်။ ထက်မဵက်တဲ့ တရားမဵားနဲႚ ဝေဖန် ဟောုကားလေ့ရြိတဲူ့ဖြးဆရာတော် အပၝအ၀င် အခဵြိႚ ဆရာတော်ဋ္ဌကီးမဵားကို ဖိတ်ုကားမြ မူပဖြိုႚ ဒေသခံမဵားကို ဖိအားပေးထားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းမဵားလည်း ထက်ြပေၞနေပၝတယ်။ ယခင် ရြေးကောက်ပြဲ ကာလမဵား နဲႚ ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် နယ်လညြ့် ခရီးစဉ်မဵားမြာ စစ်တပ်က နယ်ခံမဵားနဲႚူပည်သူလူထုကိုခိမ်းေူခာက် ဖိအားပေူးပီး လူမစိုိုံင်အောင်ူပလြုပ်ုကသလိုမဵြိးနဲႚ အားစမ်းလေ့ရြိူပီး၊ူပီးမြ ကာယကံရင်ြမဵားကို သီူးခား ဖယ်ထုတ်ူပီး ဖမ်းဆီြးိံမ်ိံငြ်းလေ့ရြိတဲ့ အစဉ်အလာမဵားကို သတ်ရစရာူဖစ်တယ်လိုႚ ဧရာဝတီတိုင်းက သံဃာတော်တပၝးက ဆိုလိုက်ပၝတယ်။ စက်တင်ဘာ သံဃာအရေးအခင်းမြာလည်း ဘုန်ုးကီးကေဵာင်းအခဵြိႚကို တမင်သက်သက် ခြဲထုတ်ူပီူးဖိခြဲ ဖဵက်ဆီူးပလိုက်တဲ့အတကြ်၊ အူခား ဘုန်ုးကီးကေဵာင်းမဵားက ကေဵာင်းထိ်ုင်ဆရာတော်ုကီးမဵားနဲႚ လက်အောက်က စာသင်သား သံဃာမဵားကို အင်အားမစုမိအောင် သြေးခြဲပစ်ိုံင်ခဲ့တဲ့ သာဓက ကလည်း ထင်ရြားပၝတယ်လိုႚ ဆက်လက် သုံးသပ်ူပသြားပၝတယ်။ မိုးမခက ဖေၞူပပေးခဲ့တဲ့ ယုဇန ဥယဵာဉ်ူမြိႚတော် ၅ လမ်း ထိပ်က တရားခေမြဵားနဲ့သီးလေးသီး စီဒီေုကာင့် အဖမ်းခံရသူ ဆိုင်ပိုင်ရငြ်ူပန်လည် လတြ်ေူမာက်လာူပီလို့သိရပၝတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ရဲကို ငြေ ကဵပ် လေးသိန်း လာဘ်ပေး ခဲ့ရတယ် လို့အိမ်နီးခဵင်းမဵားက ဆိုပၝတယ်။
ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာ
ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: မောင်ရြေုကြး - ကဵရြိုးရငြ်
ကျူရိုးရှင်မောင်ရွှေကြူးဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ မနေ့က chat တွင် တွေ့သည့် ရန်ကုန်က သတင်းထောက် ညီငယ် တယောက် စိတ်ဆင်းရဲစွာ ပြောလာမှ ဘနာဇီယာ၏ အဖြစ်ဆိုးကို သိရသည်။ အာဏာရှင်အောက်မှာပင် ယမ်းတိုက်ကြီးကဲ့သို့ ဆူပွက်နေသည့် တိုင်းပြည်သို့ မကြောက်မရွံ့ ပြန်ကာ အကာအကွယ်မဲ့ နိုင်ငံရေး ပြန်လုပ်သူကို အာဏာမက်သူ၊ အနောက်ရုပ်သေး ဟု စွပ်စွဲရက်သူကို လူဟု မဆိုချင်ပါ။ အာဏာလိုချင်၊ ရုပ်သေးလုပ်ချင်လျှင် ဒီမိုကရေစီလမ်း ကို သက်စွန့်၍ လိုက်စရာ မလိုပေ။ အာဏာရှင် မူရှာရက်ဖ်မှာလည်း ရုပ်သေး မဟုတ်ပါသလော။ နိုင်ငံရေး အမြတ်ဟူ၍ ရွေးမျှ မရဘဲ သွေးဆာ လှသည့် တစ်ဇောက်ကန်းတို့၏ အကြံ ကိုလည်း တုန်လှုပ်မိပါ၏။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် က တစ်ချိန်တည်း ပေါ်လာကြသော အာရှ အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ အနက် ဆက်လက် လှုပ်ရှားသူဟု သူ မရှိသည့် အခြားမဲ့၌ ဒေါ်စု သာ ကျန်တော့သည်။ သူ့ အဖြစ်နှင့် ယှဉ်၍ ဒေါ်စုအသက် ကိုလည်း ပူပန်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများကို ပေါ်တင်ရော မသိမသာပါ နှိမ်တတ်သည့် အာရှ၊ ပဒေသရာဇ် ဉာဉ် မပျောက်သေးသည့် အာရှ၌ ဒီမိုကရေစီနှင့် ခေတ်ပြောင်း မျိုးစေ့ ချရသူတို့ ဘဝမှာ လူလွန်မ သမီးများ ဟုပင် ဆိုသင့်ပါ၏။ ဒေါ်စုကား ကံသီ၍ ဝါးရင်းတုတ် ယဉ်ကျေးမှု မှ လွတ် လာခဲ့သည်။ အသေခံ ဗုံးခွဲဓလေ့ ထွန်းကားရာ တောင်အာရှမှ ရာဂျစ်နှင့် ဘနဇီယာတို့မှာ ဘုန်းကြီး သော်လည်း သက်မရှည် ကြရှာ။ ဘုရင်သတ်လျှင် ဘုရင်ဖြစ် ဝါဒ ကြီးစိုးရာ၊ မတူရာကို မညှိနှိုင်းဘဲ အပြတ်ရှင်း စနစ် တွင်ကျယ်ရာ၊ အာဏာရှိ ရော အာဏာမဲ့ ကပါ အကြမ်းဖက်ဝါဒ ကျင့်သုံးရာ ပစ္ဆန္တရာဇ်၌ အဘယ်ခါမှ ငြိမ်းချမ်းပါမည်နည်း။ အင်အားစုတိုင်း၊ ပြည်သူတိုင်း တန်းတူညီမျှစွာ၊ ဝပြောစည်သာစွာ ယှဉ်တွဲ နေနိုင်သောနေ့မှ အေး ပေလိမ့် မည်။ ထိုနေ့သို့ မတိုင်မချင်း တုံးအောက်က လူထု အနေနှင့် ခါးတောင်းကျိုက် မဖြုတ်၊ ဒိုတီ မလျှော့ဘဲ တစ်ဗိုလ်ကျ တစ်ဗိုလ်တက် စနစ်ဖြင့်၊ ကျူပင် ခုတ်သော်လည်း ကျူငုတ် တက်လိမ့်မည် ဟူသည့် ကျူရိုးရှင် စိတ်ဓာတ် နှင့် အားထုတ်ကြဖို့သာ ရှိတော့သည်။ အကြောက်တရား ကင်းသည့် ခေါင်းဆောင်များကလည်း “မည်မျှပင် စိတ်ဓာတ် ပြင်းပါစေ၊ ဤခန္ဒာကိုယ်မှာ အများသူငါ ကဲ့သို့ ပျက်စီး လွယ်သော အစုအစည်းသာ ဖြစ်ကြောင်း မမေ့အပ်ပေ” … ဟု ရွှေဥဒေါင်းကြီး၏ စာ ကို နှလုံးသွင်းရင်း လူမိုက်၊လူယုတ်နှင့် ယှဉ်ရာ၌ မစွန့်အပ်ရာတွင် ပါးနပ်စွာ ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ အထူး ရပ်ခံလိုပါ၏။ “လူသတ်ဝါဒ ကျဆုံးပါစေ …” Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: ရေဒြေၝင်ူးဖြ - ဟသာင်္ ကိုးသောင်း
ဟသာင်္ ကိုးသောင်း လွတ်လပ်ရေးရွှေဒေါင်းဖြူဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ မကြာမီက လွတ်လပ်ရေး နှစ် ၆၀ အတွက် မြန်မာ့အလင်းက အစိုးရ အဆက်ဆက် ရသည့် ဘွဲ့များကို ကြွားဝါ တပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အခွင့်အရေးသမား ဖြစ်မှန်းမသိသည့် ဗိုလ်စောမြင့် ၈၅နှစ် ကို ဗျူးလေသည်။ မှူးသမိန်တို့ ထုံးစံ အတိုင်း နယ်ချဲ့ရန် ကာကွယ်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေး တန်ဖိုး နားလည်ရေး တွေပဲ ပြောလေသည်။ သူပြောသည့်အတိုင်း စဉ်းစားကြည့်ရာ ဗမာတို့ လွတ်လပ်ရေး မရခင်နှင့် ရပြီးဘဝမှာ ဗျိဇုံနှင့် ဗျုံဇိ၊ ဖွတ်ကျားနှင့် ဝဲစား ပမာ အဒူဒူပဲ ဖြစ်တော့သည်။ ၁၉၄၈ က မွဲနေသည့်ဗမာတွေမှာ ခုလည်းပြောင်ပြောင်ကြီးမွဲပြနေကြတုန်းပင်။ ဟိုတုန်းက ဦးနု ပြောသည့် ဖိုးသုည တွေမှာ ယခု ကြက်တုပ်ကွေး ခေတ်တွင်လည်း ဘဲဥ မကွဲကြသေး။ ငတ်လိုက်ကြပုံများ မတော့ ခေတ်မှီ သူတိုင်း ထမင်းရည် ဝယ်သောက်ကြသည်။ ဤဖေကိုယ်က အဆိုးမြင်သည်ပြောလိုလျှင်လည်း မွဲနေသည့်အထဲမှာ စစ်ကိုင်းက ဗိုလ်စောမြင့် အမျိုးတွေ မပါရင် ပြောပါဟုပဲ ဆိုပရစေ။ ဘယ်သူတွေ အတွက် လွတ်လပ်ရေးလဲ။ ဗိုလ်စောမြင့် ကဲ့သို. နေဝင်း ခေတ်ဦးက ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း ပြုတ်ရသူမျိုး ပင် ပါရမီခြံနှင့်၊ မဟေသီမဂ္ဂဇင်းနှင့်၊ သမီး အထူးကု ဆရာဝန်နှင့် အသီးအပွင့်များကို စံစားကြချိန်ဝယ် သူနှင့် ငယ်ပေါင်း ဗကပ တောတွင်း ကျဆုံး ခေါင်းဆောင်၏ မိသားစု ဘယ်ရောက်နေကြသနည်း။ မရေစွမ်းနိုင်သော နိုင်ငံရေးမိသားစုများ၊ စစ်တပ် အောက်ခြေ အပါအဝင် လူ သန်းနှင့် ချီ၍ ဘဝ ပျက် ကြရချိန်ဝယ် အာဏာရှင် လူလည် ပတ်ကားတစု ပြည်တော်သာနေရုံ လွတ်လပ်ရေးမျိုး ကို တစ်နိုင်ငံလုံးက အငတ်ခံ ခွေးအဖြစ်ခံပြီး ကာကွယ်ကြရမည်လော။ နှစ် ၆၀ အလွမ်းဇာတ်၏ ရလာဒ်ကား နောက်ထပ် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ တဆင့် လော။ ဆင်းရဲ ဖိနှိပ်မှု သံသရာတွင်းက ထွက်ရပ်လမ်းကို မည်သူ ပြမည်နည်း။ အဆင့်ဆင့်ဆုတ်ယုတ်မှုကြီး ရယ်စရာ ကောင်းပုံက ဗမာပြေ အတိုးတက်ဆုံး အချိန်ကို မေး လာကြလျှင် စစ်မဖြစ်မီ ခေတ်ကို ပြောကြခြင်းပင်။ လူမျိုးခြား အောက် အထိုက်အလျောက် ရရှိသော အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် စီးပွားရေး ပြေလည်မှုမှာ ၁၉၄၂ မှ ယနေ.တိုင် ဖြတ်သန်းနေရသော စစ် နှင့် ဖိနှိပ်မှု၊ ခေတ်နောက်ကျ အထီးကျန်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရသဖြင့် ချုံးချုံးကျ ခဲ့ရတော့သည်။ အဖက်ဖက်မှ ဆုတ်ယုတ်လာမှုကား တစ်ခေတ်ထက် တစ်ခေတ် လျောကျလာခဲ့ကာ ယခုအချိန်၌ အာဆီယန်၏ ဖုတ်ဝင်နေသော လူနာဘဝ ဆိုက်ကာ ကျရှုံးနေသော နိုင်ငံအဆင့်သို့ ရောက်ရတော့သည်။ နိုင်ငံရေး အရ ဆုတ်ယုတ်ပုံမှာကား ပြည်တွင်းမှ တစ်ခုတည်းသော ဦးဆောင်ပါတီကြီး၊ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်နှင့် ခေါင်းရံများ၊ အခြား လူထု လှုပ်ရှားသူများ၊ စစ်အုပ်စု ဖနောင့်အောက် ပြားပြားမှောက် နေရချိန်၊ ပြည်ပရောက် လွတ်မြောက်ရေး အင်အားစုများ ကြံဖန် အသက်ဆက် နေရချိန်၌၊ ပညာရှင်လိုလို၊ ပွဲစားလိုလို၊ NGO လိုလို အဖြူကြိုက် တတ်ယောင်ကား တစု က 3rd group ဟု ရွှေပြည်အေး ဝါဒ လက်ကိုင်ထား၍ စစ်အုပ်စုကို ငါးသလောက် ကဲ့သို့ ပေါင်းစားကာ ဗမာပြေကြီးကို ဝါးစေကြဖို့ ကြံစည်လာကြသည်။ Road Map အရ ဖွားတော်မူလာမည့် အနာကပ် ပလတ်စတာ အသစ်ကြီးတွင် technocrat ကြီးများ အဖြစ် ဝင်ရောက် ချယ်လှယ်ကြဖို့ ယဉ်တော်မူ ကြကာ “မစားဘဲစွန့်” လုပ်နေကြသူများ မစားချင်လျှင် ဖယ်ကြ၊ ငါတို့ ဝင်စားမည် ဆိုသည့် အပေါက်မျိုး ချိုး လာကြသည်။ လာ ပလူးသည့် ပညာရှင် မှန်သမျှ ခွေးဖြစ်အောင် လုပ်တတ်သည့် စစ် သောက်ကျင့်ကို မကြောက်၊ ဂုဏ်နှင့် လာဘ်ကို လဲဝံ့ ကြသည့် လူများ ဖြစ်သည်။ ဖောက်ပြန်သည့် နိုင်ငံရေးသမား မှန်သမျှ နလံမထူအောင် တုံ့ပြန်တတ်သော လူထုအကြောကို သိသည့် မျောက်လွှဲကျော်များမှာ လူထုတိုက်ပွဲကို ငပိထက်ပင် ကြောက်ကြသည်။ စစ်အုပ်စုကို တံခါးပိတ်၍ သမီးရည်းစားကဲ့သို့ နားချ လိုကြသည်။ သရဲမင်းရဲစီးကာ ဘုန်းကြီးသား စားပင် စားထားကြသည့် ကိုးတောင်ကျားများကို သားရွှေဥလို မောင်မောင် ဘဘ ဆုံးမချင်ကြသည်။ စစ်အုပ်စု နားလှည့်ရာကို ပါသွားကြသည့် ဦးသိန်းဖေမြင့်၊ ဝိဓူရ သခင်ချစ်မောင်ကဲ့သို့ လက်ဝဲဆရာကြီးများပင် အရူးလုပ်ခံရဖူးသည်ကို မေ့ရအောင်ပင် အမှတ်မရှိ အာဏာ ငန်းဖမ်းကြသည်။ ဒေါ်စုအသုံးမကျ၍၊ ခေါင်းမာကာ အစိုးရကို သူတို့ကဲ့သို့ ဖင်ပေး မပေါင်း၍ သူတို့ NGO စားပေါက်တွေ မပွင့်ရကောင်းလားဟု မျက်မာန်တော် ငြိုးကြသည်။ ဘယ်နံရောခါမှ လူထုအကျိုးကို လေသံမှ မလှပ်ခဲ့ကြသော နိုင်ငံရေး အင်နန် (အင်မတန်) ကြောက်သော မဆလနှင့် ဗျူရိုကရက်အနွယ်များ၊ ဆိတ်လဇိ ပညာယှိကြီးများက ၄င်းတို့နှင့် မကင်းရာ မကင်းကြောင်း စစ်အုပ်စုထံမှ ဆင့်ရီး ခွေးမျှော် ကြသည်မှာ မဆန်းသော်လည်း၊ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမား အချို့ကပါ proposal နိုင်ငံရေး ခေါ် မျောက်ပြ ဆန်တောင်း အသံကောင်း ဟစ်ကြသည်မှာ တစ်ခါက ဘဝတူ တိုက်ပွဲဝင်ဖက်၊ ယခု ငတ်နေကြသော ရဲဘော်များ အတွက်ကား အသည်းနာစရာ။ အနှီကဲ့သို့ ကာလကြိုက် မစွန်.ဘဲ မျက်မျက်ကလေး စားရသော အချောင်သမား နိဿရည်းကား ဟသ်ာကိုးသောင်းဇာတ်၏ အစပင်တည်း။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနိမ့်ကျ ဖိနှိပ်ခံရမှု အပြင် နောက်ဆုံး၊ အသိသာဆုံး ဘာသာရေး အရ ဖိနှိပ်မှုကား စစ်အုပ်စုနှင့် လူထုကြားမှ စစ်မျက်နှာသစ် ဖြစ်လာသည်။ ယခင် သူ့ ကျွန် အောက်တုန်းကမှ “ မယ်တို့ ဌာနီဝယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ဥပုသ်စောင့်လို့ ရယ်….” ဟုရင့်ကြူးနိုင်သေးသည်။ သင်္ကန်း မချွတ်လို၍ အစာငတ်ခံ ပျံတော်မူသော ဦးဝိစာရကို အာဇာနည်အဖြစ် ဂုဏ်မြောက် နိုင်ကြသေးသည်။ အလောင်းအစ ဖျောက်သည့်ခေတ် မဟုတ်သေး။ ၁၉၃၈ မှ ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ၊ ၁၉၄၈ ကိုလိုနီ လွတ်လပ်ရေး၊ ၁၉၅၈ ပထမ စစ်အာဏာသိမ်းမှု၊ ၁၉၈၈ အုံကြွမှုများ နောက် ၂၀၀၈ နှစ် ၆၀ ပြည့် စိန်ရတုနှစ် တွင် အာဏာရှင် လွတ်လပ်ရေး အောင်ပွဲဆင်ဖို. အားခဲရန်သာ ရှိတော့သည်။ ရွှေပြည်တော် မျှော်မဝေးပြီလော။ လှံရိုးများကား ချွန်လေပြီ၊ လှံဖျား ချွန်ဖို့သာ ကျန်တော့သည်။
Reactions: လသြန်း - ကမ္တာုကီးနောက်ကို လ္တွောက်မလိုက်ိုံင်ဘူး … မေမေ
ကမ္တာုကီးနောက်ကို လ္တွောက်မလိုက်ိုံင်ဘူး … မေမေလသြန်းဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ကမ္တာုကီးနောက်ကိုလ္တွောက်မလိုက်ိုံင်ဘူး မေမေကဵနော်နောက်ကိုသာကမ္တာုကီး လ္တွောက်လိုက်စေခဵင်တာအဲဒီအတကြ် ဒဏ်ရိုက်ခံရမယ် ဆိုရင်လည်း ခံလိုက်မယ် အင်တာနက် ခေတ်မြာအင်ဗာတာတောင် မသုံိးိုံင်လိုႚဖယောင်းတိုင်နဲႚ နေခဲ့ရတဲ့ ညတေလြည်း မဵားလပြၝူပီ ကမ္တာရြာုကီးထဲမြာတနေႚတူခား တံငၝတြေ မဵားမဵားလာမုဆိုးတြေ မဵားမဵားလာအဲဒီုကားထဲမြာ တံငၝနားနီး တံငၝမုဆိုးနားနီး မုဆိုး မူဖစ်ခဲ့တာကိုပဲ ဂုဏ်ယူပၝရစေ ဟိုဟာ လမ်းညန်ြဒီဟာ လမ်းညန်ြလမ်းညနြ် စာအုပ်တေအြလည်မြာကိုယ်သြားရမယ့်လမ်းကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ရြာဖေရြေးခဵယ်ခဲ့ပၝတယ် အိမ်ခန်းထဲူပန်ုကည့်လိုက်တော့လည်းဇိမ်ခံပင်္စည်း ဆိုလိုႚနဲႚ နေတဲ့ ပက်လက်ကုလားထိုင်အို တလုံးရယ်ဓာတ်ခဲ ရေဒီယိုလေး တလုံးရယ်ဆေးပေၝ့လိပ်တိုတေပြဲ ရြိပၝတယ် စေဵးကကြ် စီးပြားရေးခေတ်မြာပဲူပတ်ြနဲႚ ဝေးခဲ့ရပဲပင်ပေၝက်နဲႚ ဝေးခဲ့ရနောက်ဆုံး စေဵးနဲႚတောင် ဝေးခဲ့ရပၝူပီ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရငြ်း ဆိုတာုကီးကိုမေမေ့ကို ကဵနော် ဘယ်လို ရငြ်ူးပရမြာလဲ တခၝတလေ နောက်ဘ၀ကို မေ့နေသလိုအနာဂတ်ကို မေ့နေမိတယ် ဒၝပေမယ့် တတိယလိငြ်း ဆိုတာုကီးကကဵနော်တိုႚ ထမင်းဝိုင်းထဲ ၀င်လာခဲူ့ပီ လေ ဘာပဲူဖစ်ူဖစ်ကမ္တာုကီးနောက်ကိုလ္တွောက်မလိုက်ိုံင်ဘူး မေမေကဵနော့်နောက်ကိုသာကမ္တာုကီးကို လ္တွောက်လိုက်စေခဵင်တာအဲဒီအတကြ် ဒဏ်ရိုက်ခံရတာတေလြည်း မဵားလပြၝူပီ မေမေ။ ။သရုပ်ဖော် ပန်းခဵီ - ပန်းခဵီ ထိန်လင်း
Reactions: ကာတနြ်း အိုးဝေ - ကာတနြ်း Dec 28th 2007
ကာတနြ်း အိုးဝေ - ကာတနြ်း Dec 28th 2007
Reactions: သီးလေးသီိးံငြ့် ဆေးရောင်စုံ အူငိမ့်ူပည်ပတငြ် လညြ့်လည်မည်
သီးလေးသီးနှင့် ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့် မလေးရှား၊ ထိုင်းနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံများတွင် ကပြဖျော်ဖြေမည်မိုးမခ အထောက်တော် (စင်္ကာပူ)ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းတွင် ကျင်းပဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးနောက် ပြောင်မြောက်သော နိုင်ငံရေး ပြက်လုံးများကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုအကြား အားပေးမှုကို အထူးပင် ရရှိလျက်ရှိသော “သီးလေးသီးနှင့် ဆေးရောင်စုံ” အငြိမ့်အဖွဲ့သည် ယခုအခါ ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိလာပြီး မလေးရှား၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံများတွင် လှည့်လည် ကပြမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံမြို့တော် ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယပွဲ အနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ပီနန်မြို့တွင် ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်ကပြမည်။ ထို့နောက် ဆေးရောင်စုံ အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင်လည်းကောင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်လည်းကောင်း သွားရောက်ဖျော်ဖြေကပြမည်ဟု သိရသည်။ ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့်အဖွဲ့တွင် ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး ချောစုမျိုး၊ ရှေ့ထွက်မင်းသမီး မြစပယ်ငုံနှင့်အတူ လူရွှင်တော်များဖြစ်ကြသော ဂေါ်ဇီလာ၊ စိန်သီး၊ ကြယ်သီး၊ ပန်းသီးနှင့် ဆီးသီးတို့ ပါဝင်ကြသည်။ အဆိုပါ ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် အထူးစိတ်ဝင်စားဘွယ် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ ပါရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ထိုင်ခုံလက်မှတ်များကို စတင်ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်ရာ ကြည့်ရှုအားပေးလိုသော ပရိသတ်အနေဖြင့် မြန်မာစုရပ်နေရာများတွင် မေးမြန်းစုံစမ်း ၀ယ်ယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ ကြော်ငြာ ပိုစတာ
Reactions:ူမန်မာူပည်တငြ်းမြ မဵြိးဆက်သစ် လူငယ်မဵား အစည်းအရုံးက သီခဵင်းသစ်ူဖန်ႚခဵိ
ူမန်မာူပည်တငြ်းမြ မဵြိးဆက်သစ် လူငယ်မဵား အစည်းအရုံးက သီခဵင်းသစ်ူဖန်ႚခဵိဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ဒီနေရာကနေ နားဆင်ိုံင်ပၝူပီ။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
သံဃာမဵား ရြားပၝးနေခဵိန်၊ ဘုရား စေတီမဵားတငြ် လူစည်ကား
ကဵင်းပနေုက မိုးကောင်းဘုရားပြဲုကီး ၁၁၅ုကိမ်ေူမာက်ူပီသံဃာမဵား ရြားပၝးနေခဵိန်၊ ဘုရား စေတီမဵားတငြ် လူစည်ကားမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ လကုန် သီတင်းပတ်၊ိံစ်ြမကူးမီ ကဵင်းပနေုကူဖစ်သော ရန်ကုန်ူမြိႚ၊ ရန်ကင်ူးမြိႚနယ်၊ မိုးကောင်း ဘုရားပြဲုကီးကို ယခိုံစ်ြတက်ြလည်း ၁၁၅ုကိမ်ေူမာက် ကဵင်းပူဖစ်သည်။ ပၝ၀င်နေုက ဇာတ်ပြဲမဵား၊ ဘုရားစေဵးဆိုင်တန်းမဵားကို ထုံးစံ အတိုင်း တြေႚနေရသော်လည်ူးပည်သူမဵားအနေူဖင့် အူမဲတန်း ဖူးတြေႚပူဇော်နေုကူဖစ်သော အနီးတ၀ိုက်ရြိ ဘုန်ုးကီးကေဵာင်းမဵား၊ စာသင်တိုက်မဵားမြ သံဃာတော်မဵားကို မတြေႚူမင်ုကရဘဲ၊ ဘုရာုးကီိးံငြ့် အလခြံ အရပ်ဝတ် ပုဂ္ဂြိလ်မဵားသာ ထင်သာူမင်သာ တြေႚုကရသည်ဟု ဆိုပၝသည်။ သာသနာကို စောင့်ရြောက် ထိမ်းသိမ်းနေုကသည့် သံဃာတော်မဵား ရြားပၝးနေခဵိန်တငြ်၊ ဘုရား ကေဵာင်းဝင်းမဵားအတငြ်းတငြ် ဆီ မီး ရေခဵမ်းမဵား ကပ်လြ ပူဇော်ူပီး၊ ဘုရားသားတော်မဵာူးမန်မာူပည်အြိံႚ လတ်ြလပ် ထင်လင်းစြာူးပန်လည် သာသနာူပြိုံင်ုကစေရေးအတကြ် ၀မ်းနည်းစြာူဖင့် မ္တွော်မနြ်း ဆုတောင်းနေရပၝေုကာင်း မိုးမခသိုႚ ဘုရားဖူး မိသားစုတစုကေူပာုကားခဲ့ပၝသည်။ မိုးကောင်းဘုရားပြဲူမင်ကငြ်း ဓာတ်ပုံမဵား တင်ဆက်လိုက်ပၝသည်။ ကူပနေုက မိုးဝင်းတိုႚ ဇာတ်အဖြဲႚ ပိုစတာူမန်မာမုန်ႚဆိုင် ဘုရားပြဲ စေဵးတန်း ဗိံ္ဌလြ ဦးထုပ် မဟုတ်တော့၊ ကဵန်ကေဵာင်း ဦးထုပ် နဲႚ စေဵးခင်း ကောက်ညငြ်းကဵည်တောက်က လက်တဆစ်အထိ မတိုသေးပၝကိုးကယ်ြစရာ ရုပ်တုမဵား၊ ဘုရားကေဵာင်းဆောင် အဆင်တန်ဆာမဵား
Reactions: မိုးမခ - စာအုပ် မိတ်ဆက်
စာအုပ် မိတ်ဆက်မိုးမခဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ မူးနေတဲု့ကယ်တံခနြ် - ပိုင်စိုးဝေ မိံ္ဇလေးအေူခစိုက် Majestic Publishing က မိံ္ဇလေးသား ကဗဵာကေဵာ် ပိုင်စိုးဝေရဲ့ကဗဵာ ၄၂ပုဒ်ကို စုစည်းထုတ်ဝေလိုက်ပၝတယ်။ သူ့ ကဗဵာတေထြဲမြာ ထင်ရြားတဲ့ "ပငြ့်ထက်ြသြားတဲ့ ၈၄ လမ်းမ" ကဗဵာရည်ြလည်း ပၝ၀င်သလို မဂ္ဂဇင်းစာ မဵက်ြိာံမဵားမြာ မဖေၞူပရသေးတဲ့ ကဗဵာအခိဵြ့ လည်းပၝ၀င်ပၝတယ်။ စာမဵက်ြိာံ ၈၉ မဵက်ြိာံပၝ၀င်ူပီး တန်ဖိုးကဵပ်၉၀၀နဲ့ရောင်းတဲ့ ဒီစာအုပ်ကို ပန်းခဵီဝေခဵစ်ကို က မဵက်ြိာံဖုံးရေးဆြဲပေးပၝတယ်။ တစ်ဝက်လောင်ကဋ္ဋမ်ူးပီး စီးကရက်တစ်လိပ်နဲ့လင်ိးိုံ့ တေရြဲ့ဘာသာဗေဒ ပင်လယ်-ကမ်ူးပင်အောက်က မေ့ဆေးပုလင်း မြားယငြ်းဖေၞူပခဲ့မြ လမြ်းသူ့ပန်းခြေ မိတ်ဆေတြေရြဲ့ဖန်ခက်ြထဲမြာ ငၝ့အတိတ်၊ ငၝ့ပင်္စပြဍ္ဎန်၊ ငၝ့အနာဂတ် တဖဵပ်ဖဵပ်တုန်ခၝနေပေၝ့။ ("ပငြ့်ထက်ြသြားတဲ့ ၈၄လမ်းမ" မြ) ၀တ္ဇတြိုမဵား ၁ - ရဲဘုန်းခေၝင် ၀တ္ဇတြိုမြာ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ရြိလတြဲ့ ဆရာဝန်စာရေးဆရာ ရဲဘုန်းခေၝင်ရဲ့ဝတ္ဇတြို ၂၁ ပုဒ်ူဖစ်ပၝတယ်။ ဒေၝက်တာအေးကေဵာ်လို့အမည်ရင်းရြိတဲ့ ကော့သောင်း အေူခစိုက်စာရေးဆရာ ရဲဘုန်းခေၝင် က သူ့ မြာ အသေအခဵာရြိတဲ့ ပရိသတ် "အနည်းငယ်" အတကြ် ရည်စူး ထုတ်ဝေတယ်လိုႚ အမြာစာမြာ ဆိုပၝတယ်။ ရနံႚသစ်၊ ပေဖူးလြာ၊ မဟေသီ၊ ဟန်သစ်၊ ရုပ်ရင်ြတေးကဗဵာ၊ ရတီနဲႚ ပိတောက်ပငြ့်သစ်တိုႚ မြာ ဖေၞူပခဲ့တဲ့ ယခု ၀တ္ဇတြေ အတကြ် သရုပ်ဖေၞပုံမဵားကို ပန်းခဵီ မောင်ိုိံး က ရေးဆဲပြေူးပီး မဵက်ြိာံဖုံးကတော့ မောင်ဒီရဲႚ လက်ရာူဖစ်ပၝတယ်။ ကဗဵာဆရာ စိုင်းဝင်ူးမင့်ရဲႚ ကေဵာ်မြေးစာပေ ကထုတ်ဝေူပီး ရောင်းစေဵးက ၁၅၀၀ ကဵပ်ူဖစ်ပၝ တယ်။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: ကာတနြ်း အိုးဝေ ရဲႚ ကာတနြ်း - Dec 27th 2007
ကာတနြ်း အိုးဝေ ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇
Reactions:ူမန်မာူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာ - ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇
ူမန်မာူပည်တငြ်းရေးရာ သတင်းတိုထြာမိုးမခ (ရန်ကုန်)ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ ရန်ကုန်ူမြိ့ မြာ စားသောက်ဆိုင် ဖငြ့်ခငြ့်ကန့် သတ်သြားမယ်ေူဖရငြ်းခဵက်မဵားနဲ့စင်ရော်မောင်မောင် ရိုက်ကူးခငြ့် ပိတ်ပင်ခံရူခင်း မရြိပၝဆိုတဲ့ ဖိုးဖြ ရန်ကုန်ူမြိႚထဲရြိ အမေရိကန် သံရုံးရြေႚက အတားအဆီးမဵာူးဖတ်ြသိမ်ူးပီ ပိတ်ဆိုႚထားသော တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကို အထူးဖတ်ခငြ့်ရသူ ရြိ လာမည့် စနေနေႚတငြ် သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဓမ္ထာရုံ တငြ် တရားဟောမည် ရန်ကုန်ူမြိ့ မြာ စားသောက်ဆိုင် ဖငြ့်ခငြ့်ကန့် သတ်သြားမယ် ၂၀၀၈ ခိုံစြ်ဦးကစူပီး ရန်ကုန်ူမြိ့ တငြ်းမြာ စားသောက်ဆိုင်ဖငြ့်ခငြ့်ကို ကန့်သတ်ထိန်းခဵပ်ြသြားတော့မယ်လို့မြိ့ တော်ဝန် ဗိုလ်မြးခဵပြ် အောင်သိန်းလင်းက ဆိုပၝတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မဵားဟာ လူတေကြို အခဵိန်ူဖနြ်းတီးဖို့ဖငြ့်လစ်ြထားတာူဖစ်ေုကာင်း၊ ဒၝေုကာင့် အခဵိန်ူဖနြ်း ငြေူဖနြ်းရန် ဖငြ့်လစ်ြတဲ့ စားသောက်ဆိုင် မဵားကို ကန်ႚသတ်သြားမြာူဖစ်ေုကာင်း သူကေူပာပၝတယ်။ ၂၀၀၈ိံစြ်ဦးက စူပီး စားသောက်ဆိုင်မဵားကို အရင်လို လယ်ြလယ်ြကူကူ ခဵပေးတော့မြာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲူ့မြိႚတော်စည်ပင်ရဲႚ ဆုံူးဖတ်ခဵက်အပေၞ အခဵြိႚကတော့ စည်ပင်တြေ စားပေၝက် ထပ်တိုးပန်ူပီလိုႚ မတ်ြခဵက်ခဵုကရင်း လိုင်စင်ေုကး အူပင် ထပ်ပေုးက ရတော့မယ့် လာဘ်ငြေ ပမာဏကို တက်ြခဵက်ုကည့်နေုကပၝတယ်။ အိုံပညာရင်ြတဦး အဆိုအရတော့ စားသောက်ဆိုင်မဵားတငြ် လူအမဵားစုဝေုးကူပီး၊ူဂိလ်ြတုက ထုတ်လငြ့်တဲ့ ဒီဗီဘီရဲႚ ရုပ်ူမင်အစီအစဉ်တေကြို ၀ိုင်းဝန်ုးကည့်ရြုကတာကိုလည်း အာဏာပိုင်တေကြ ကန်ႚသတ်လိုတဲ့ သဘောလိုႚ သိရပၝတယ်။ေူဖရငြ်းခဵက်မဵားနဲ့စင်ရော်မောင်မောင် စက်တင်ဘာ အရေးအခင်း အူပီးမြာ "မင်္ဇဵိမအလင်း" ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဌဘာသာ မတ်ြတမ်းတင် ဇာတ်ကားတစ်ကားကို စစ်အစိုးရ အကူအညီနဲႚ ရိုက်ကူးနေတဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်ကူပည်ပမီဒီယာအခဵြိ့ ရဲႚ ထုတ်လငြ့်မအြပေၞ တုန်ႚူပန်ေူဖ ရငြ်းလိုက်ပၝတယ်။ ယခုအပတ် Flower News မြာပၝတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် အတငြ်းမြာ သူက ယခု ဇာတ်ကားကို မိံ္ဇလေးမြာ ရိုက်ကူးစဉ် မဟာဂိံ္ဌာရုံကေဵာင်းတိုက်နဲႚ အူခား ကေဵာင်းတိုက်မဵားမြ သံဃာတော်မဵားက ပူးပေၝင်း ကူညီမြ မရြိဘဲ မလိုလားဟန်ူပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုငင်းဆို လိုက်ပၝတယ်။ "ူပည်ပမီဒီယာတြေ ထုတ်ူပန်သလို ကဋ္ဋန်တော့်မြာ ရိုက်ခငြ့်မရလိုႚ စောင့်နေရတာတိုႚ၊ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်းဝင်း အတငြ်းကနေ မောင်းထုတ်ခံရတာတို့ဆိုတာ လုံးဝ မူဖစ်ခဲ့ပၝဘူး။ ဒၝတေကြ ကဋ္ဋန်တော့် ကို သက်သက် စော်ကားေူပာဆိုကတာပၝ …" လို့သူကဆိုပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် ဒီဇာတ်ကားဟာ သူႚရဲ့အဋ္ဌကီးအကဵယ်ဆုံး အိုံပညာအလြူဖစ်ူပီူးပည်ပမီဒီယာတြေေူပာသလို အူခားရည်ရယ်ြခဵက် မရြိပၝေုကာင်း၊ ရုပ်ရင်ြနယ်မြာ ၀ၝဒူဖန်ႚခဵိရေး ဇာတ်ကားမဵား ရိုက်ကူးရင်း မင်းသမီးငယ်မဵားနဲႚ ရပ်ြပေတြဲ့ ဇာတ်လမ်းမဵား မုကာခဏ ထက်ြလေ့ရြိသူ ဒၝရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင် က ထပ်လောင်းေူပာဆိုပၝတယ်။ ရိုက်ကူးခငြ့် ပိတ်ပင်ခံရူခင်း မရြိပၝဆိုတဲ့ ဖိုးဖြ စက်တင်ဘာလ အရေးတော်ပုံအတငြ်း ထင်ရြားတဲ့ လူရင်ြတော်ဇာဂနာနဲ့အတူ သံဃာတော်မဵားကို ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့ လူရင်ြတော် ဖိုးဖကြ သူ့ ကို ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးခငြ့် ပိတ်ပင်ထာူးခင်း မရြိေုကာင်းနဲ့ဇာတ်ကားမဵား လက်ခံရိုက် ကူးမြာူဖစ်ေုကာင်း ၃၅ လမ်း ထဲက ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး အခဵြိ့ ကိုေူပာဆိုသြားခဲ့ ပၝတယ်။ စက်တင်ဘာလ အရေးအခင်းအူပီး စစ်အစိုးရက စာပေနဲႚ အိုံပညာရငြ် အခိဵြႚအပေၞ အရေးယူပိတ်ပင်မမြဵာူးပလြုပ်ခဲ့ပေမယ့်ူပည်ပ မီဒီယာမဵား နဲိုံ့င်ငံတကာရဲ့ဖိအားမဵားေုကာင့် အခဵြိႚ့ ပိတ်ပင်မမြဵားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပၝတယ်။ ကန်တော်ဋ္ဌကီး၊ မ္တွော်စင်ကဋ္ဋန်းအတငြ်းမြာေူပာင်ေူမာက်တဲူ့ပက်လုံးမဵားနဲႚူပည်သူႚဆိံ္ဋမဵားကို ဖေၞထုတ်ဖငြ့်ခဵသြာုးကတဲ့ သီးလေးသီးနဲႚ ဂေၞဇီလာတိုႚလည်း ၀န်ခံလက်မတြ် ရေးထိုးရူခင်း ကလြဲူပီး အရေးယူခံရူခင်း မရြိပၝလို့သိရပၝတယ်။ ယဉ်ကေဵးမဝြန်ဋ္ဌကီးဌာန ၀န်ထမ်းမဵာူးဖစ်ုကတဲ့ သီးလေးသီးကို ရာထူးမြ ဖယ်ရြားဖို့အမိန့် ထကြ်ူပီးမြ မီဒီယာမဵားရဲ့သတင်းလငြ့်ထုတ်မမြဵား အူပီးမြာူပန်လည်ခန့် အပ်ခဲ့တာလို့သိရပၝတယ်။ ရန်ကုန်ူမြိႚထဲရြိ အမေရိကန် သံရုံးရြေႚက အတားအဆီးမဵာူးဖတ်ြသိမ်ူးပီ ၂၀၀၇ အရေးအခင်းကာလမဵား အစူပကြတည်းက အမေရိကန်သံရုံးရဲႚ တောင်းဆိုခဵက်အရ လုံခြံရေးအတကြ် သံရုံးရြေႚ လမ်းမပေၞမြာ အတားအဆီး အကာအကယ်ြမဵား ထားရြိခဲ့ပၝတယ်။ ယခု သီတင်းပတ်မြာတော့ ထို အကာအရံမဵားကိုဖတ်ြသိမ်းလိုက်ပၝူပီ။ အတည်မူပြိုံင်သေးတဲ့ သတင်းမဵား အဆိုအရူပည်သူပိုင်လမ်းကို အတားအဆီူးပရြန် အမေရိကန်သံရုံးက တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတကြ်၊ လမ်းပိတ်ဆိုႚထားပေးရသည့် နစ်နာေုကး တလလ္တွင် ဒေၞလာ ၁ သိန်း စစ်အစိုးရထံကို ပေးဆောင်နေရတယ် လိုႚ သိရပၝတယ်။ ယခုလို လမ်းဖငြ့်ူပီးတဲ့နောက်ူမန်မာစစ်အာဏာပိုင်မဵား အဖိုႚ ဒေၞလာ စားပေၝက် ပိတ်သြားရူပီလိုႚ အဆိုပၝ သတင်းက ဆိုပၝတယ်။ ပိတ်ဆိုႚထားသော တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကို အထူးဖတ်ခငြ့်ရသူ ရြိ ကုက္ကြိင်းလမ်းဆုံဖက် အူခမ်းတငြ် အရက်ရောင်းခဵသူ အမဵြိးသမီးမြာ လညြ်းတန်းစေဵးသြားရာတငြ် ပိတ်ဆိုႚထားသော တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း အပိုင်းကို အတားအဆီးမရြိ ကေဵာ်ူဖတ်ူပီး သြာိးိုံင်ေုကာင်း အတည်မူပြိုံင်သော သတင်းမဵားက ဆိုပၝသည်။ အစောင့်ခဵထားသော စစ်သာိးံငြ့် အရာရြိမဵားမြာ သူမ ပေးကမ်းထားသည့် အရက်ပုလင်းမဵား မဵက်ြိာံေုကာင့် ယခုလို အထူးအခငြ့်အရေး ရနေပုံ ရြိသည်ဟု အဆိုပၝ သတင်းက ဆိုသည်။ လာမည့် စနေနေႚတငြ် သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဓမ္ထာရုံ တငြ် တရားဟောမည်ူမန်မာူပည်သူအမဵား၏ စိတ်ဝင်တစား အားပေူးခင်းကို ခံရသော တရားပြဲမဵားအနက် သီတဂူ ဆရာတော် ဦးဉာဏိသရ၏ တရားပြဲမဵာိးံငြ့် ပတ်သက်ူပီး အပိတ်ခံရူခင်း ကောလဟာလမဵား ထက်ြပေၞနေခဵိန်တငြ် ဂဵာနယ်မဵားကလည်း ဆရာတော်ုကီး၏ တရားပြဲမဵားမြာ ပုံမန်ြအတိုင်း ကဵင်းပလ္တွက်ရြိေုကာင်း သတင်းမဵား ထုတ်ူပန်လ္တွက်ရြိသည်ကို တြေႚရသည်။ ယခု လာမည် စနေနေႚ၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဓမ္ထာရုံ တင်ြလည်း တရားပြဲ ကဵင်းပမည့်ေုကူငာထားသည့်အတကြ် တရားသြားနာမည့် လူအမဵာူးဖင့် စည်ကားမည်ဟု သိရသည်။ စစ်အစိုးရိံငြ့် အပေၝင်းအပၝမဵားကမူ ဆရာတော်ုကီးကို မဖမ်းခဵင်လိုႚုကည့်နေတာဟု မတ်ြခဵက်ပေးသည်ဟု သတင်းလည်း ထက်ြနေသည်။
Reactions: မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း- ကိုယ့်ကဋ္ဋန်မခံ္ဘပီ
ကိုယ့်ကဋ္ဋန်မခံ္ဘပီမိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဒီဿဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ူမန်မာူပည်ကို ဘေးကနေ ထိုင်ုကည့်ရင် အခုလိုတြေႛရပၝမယ်- အဂဿလိပ်၊ ဂဵပန်တိုႛ ကဵြးကေဵာ်၊ ကဋ္ဋန်ူပြ၊ အိုိံင်ကဵင့်တာကို ခံခဲ့ရတယ်။ူမန်မာူပည်သားမဵားကိံစ်ြပေၝင်း အတော်ုကာ တော်လန်္ဘြပီးမြ ကဋ္ဋန်ဘ၀ကနေ လတ်ြခဲ့တယ်။ လတ်ြလပ်တဲိုိံ့င်ငံ လတ်ြလပ်တဲူ့ပည်သူတြေူဖစ်ခဲ့တယ်။ သိုႛပေမယ့်လည်း ခုတော့ မလတ်ြလပ်တော့ပၝဘူး။ူမန်မာူပည်မြာ ကိုယ့်အခဵင်းခဵင်း ကဋ္ဋန်ူပနြေပၝ္ဘပီ။ သခင်ပေၝက်စတေကြို ထောင်ေူခာက် လ မက၊ေူခာက်ိံစြ် မက ခဵနေပၝ္ဘပီ။ အလန်ြအကဋ္ဋံ ဖြိံပ်မတြေ အောက်ကနေ ရုန်းထကြ်ုကတဲ့သူမဵားလည်း ထက်ြပေၞလာပၝတယ်။ ဥပမာ ဒေသခံအာဏာပိုင်တေကြို တရားစဲခြဲု့ကတဲ့ ကော့မြး္ဘမြိႛနယ်၊ ပိဲံဍ္ဍကုန်းကေဵးရြာက လယ်သူမဋ္ဌကီး ဒေၞခင်ဝင်း၊ ကော့မြး္ဘမြိႛနယ်ကပဲ မစုစုြေိံးတိုႛပၝပဲ။ သူတိုႛရဲႛ အံတုမတြေဟြာ မုကာခင်က ပေၞပေၝက်ခဲ့တဲ့ ရဟန်းတော်တြေ၊ ကေဵာင်းသားတြေ၊ူပည်သူတေပြၝ၀င်တဲ့ ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေးရဲႛ ရြေႛေူပးလပ်ြရြားမတြေလြိုႛေူပာလိုႛရမယ် ထင်ပၝတယ်။ ရေဝြၝရောင်လပ်ြရြားမကြလည်ိးုိံင်ငံအတကြ် လူထုအတကြ် အနစ်နာခံတဲ့သူတြေ၊ ခေၝင်းဆောင်တြေ အမဵားအူပား မြေးထုတ်ပေးခဲ့ပၝတယ်။ သူတိုႛထဲက ခေၝင်းဆောင်တဦူးဖစ်တဲ့ အရင်ြဂမ္တီရ အထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အခၝ သူႛရဲႛ မယ်တော်ူဖစ်သူ ဒေၞရေးက ကဗဵာတစ်ပုဒ်ရေး္ဘပီး စာနယ်ဇင်းဌာနတေကြို ရတ်ြဆိုဖတ်ူပခဲ့ပၝတယ်။ ကဗဵာထဲမြာ " ငၝ့မြာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အမဵားဋ္ဌကီးရိတြယ်၊ငၝအားမငယ်တော့ဘူး၊ဂုဏ်တောင် ယူရဦးမြာ။ငၝ မဵက်ရည်ကဵတာတောင် ရက်ြမိပၝရဲႛ …" လိုႛ ရေးဖြဲႛထားပၝတယ်။ ဟုတ်ပၝတယ်။ အမေဒေၞရေးမြာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အမဵားဋ္ဌကီး ရိပြၝတယ်။ ဘ၀တူတြေ၊ိုိံင်ငံရေးအကဵဉ်းသား မိသားစုတြေ၊ ၀ိုင်းဝန်းအားပေးသူတြေ၊ တော်လန်ြအံတုနေသူတြေ အမဵားဋ္ဌကီးပၝ။ တခဵိန်တည်းမြာပဲ ဖြိံပ်သူကလည်း အဆက်မူပတ် ဖြိံပ်၊ အိုိံင်ကဵင့်၊ ကဋ္ဋန်ူပနြေတုန်းပၝ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ုကာသပတေး ညဘက်မြာ ဘီဘီစီူမန်မာဌာနက စိတ်ဝင်စားစရာ ဆက်သယ်ြမေူးမန်းခန်းတစ်ခု ထုတ်လငြ့်သြားပၝတယ်။ ဆက်သယ်ြမေူးမန်းသူက ဦးမင်းထက်ူဖစ်ပၝတယ်။ အေုကာင်းအရာကတော့ ထင်ရာစိုင်းနေတဲ့ အာဏာပိုင်တေနြဲႛ လယ်သမားတခဵြိႛ ထိပ်တိုက်တြေႛမတြစ်ခုပၝ။ အဲဒီ လယ်သမားတေရြဲႛ မဟုတ်မခံစိတ်ဓာတ်ကို အလေူးပတြဲ့အနေနဲႛ၊ ဂုဏ်ယူတဲ့အနေနဲႛ ဘီဘီစီထုတ်လငြ့်ခဵက်ကိုပန်နားထောင်္ဘပီး စာစီပေးလိုက်ပၝတယ်။ ဖတ်ုကည့်ုကပၝဦး။ ထောင်ခဵရင်လည်း ခဵပၝစေ၊ ရိသြမ္တွပိုက်ဆံကုန်လည်း ကုန်ပၝစေ ဆ္ဘိုပီး တရားရုံးတက် ရင်ဆိုင်ုကပုံ ပေၞပၝတယ်။ မတရားမတြေကြို တိုိံင်ငံလုံးသိအောင် ဖငြ့်ခဵဖိုႛ အသံလငြ့်ဌာနတေကြို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက်သယြ်ေူပာုကားလိုက်ပၝ္ဘပီ။ ဘီဘီစီထုတ်လငြ့်ခဵက် ပဲခူးတိုင်း ဒိုက်ဦး္ဘမြိႛနယ်၊ ဘိုးနီကေဵးရြာက တောင်သူတေကြ္ဘိုမြိႛနယ် အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်က ဧက တိုးစိုက်ရမယ်လိုႛ ဆ္ဘိုပီး ကုန်းေူမတေကြို ခုတ်ထင်ြရငြ်းလင်း လုပ်ခိုင်းခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီနေရာဟာ ရန်ကုန်-မိံ္ဇလေး အဝေးေူပး မဟာဗဵဟြာလမ်းမဋ္ဌကီးနဲႛလည်း ကပ်နေတဲ့ နေရာပၝ။ ဒီိံစ်ြမြာတော့ စိုက်ပဵြိးထားတဲ့ သီြးိံတြေ အရိန်ြရနေတုန်းမြာပဲ အဲဒီေူမကက်ြတေကြို အလိုရိတြဲ့ကုမ္ထဏီတစ်ခုက တရားစဲလြိုႛ လယ်သမားတေထြဲက သုံးဦး တရားရင်ဆိုင်နေရပၝတယ်။ အေူခအနေ အကဵြိးအေုကာင်းတေကြိုတော့ ကိုယ်တိုင်တရားစဲခြံနေရသူ လယ်သူမဋ္ဌကီးတစ်ဦးရဲႛဇနီး ၀မ်းဆဲဆြရာမ ဒေၞတင်တင်မာက အခုလိုေူပာူပပၝတယ်။ "ဒီေူမတေကြို အတင်းအဓမ္ထလာခိုင်းတုန်းကလည်း သူတိုႛကပဲ လာခိုင်းတာပၝ။ မူဖစ်မနေ လုပ်ရမယ်၊ စည်းဝေးပဲတြေ လုပ်္ဘပီးတော့၊ တစ်ဋ္ဌကိမ်တည်းတောင် မဟုတ်ပၝဘူးရငြ့်၊ ဒ္ဘီမြိႛနယ်အဖြဲႛအစည်းပေၝင်းစုံ ကဵမတိုႛ ဒီေူမဋ္ဌကီးတေကြို မူဖစ်မနေ လုပ်ရမယ်။ အရင်ဆုံး ကဵမတိုႛ တင်လ္တွောက်လိုက်တဲ့အတကြ် ခင်ဗဵားတိုႛ တင်လ္တွောက်ထားတဲ့ လ္တွောက်လြာတေကြ ကဵ္ဘပီ၊ မလုပ်လိုႛရိရြင် ခင်ဗဵားတိုႛ အရေးယူခံရမယ်၊ အတင်းအဓမ္ထ ခိုင်းတယ်ရငြ့်။ ကဵမယောက်ဵားကလည်း ဒီေူမကို အိုစာမင်းစာလေး ရအောင် ဆ္ဘိုပီး တောဋ္ဌကီးမဵက်မည်းကို ခုတ်ထင်ြရငြ်းလင်ူးပီးတော့ အပင်ပမ်းအဆင်းရဲခံစြာနဲႛ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပၝတယ်။ ကဵမတိုႛက ဒီေူမတေမြာ မိုးစပၝး ဒီလိုစိုက်တာ မအောင်ူမင်ဘူးဆိုတာ သိပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ရြေႛရေးကို တက်္ဘြပီးတောိံ့စ်ြရည်ြပင်စိုက်လိုႛရရင်တော့ တိုႛ အိုစာမင်းစာရမယ် ဆ္ဘိုပီး ဒီေူမတေကြို လုပ်ုကတာပၝ။ ဒီိံစ်ြမိုးတငြ်း ၂၀၀၇လည်းကဵရော ဒီေူမကို တောင်ယာမိုးစပၝးရော၊ ဆူးထိုးစပၝးမြ ကဵမတိုႛ ဘမဲစပၝး ရြာဝယ်ပေူးပီး စိုက်ခိုင်းတာပဲ ကဵမယောက်ကဵားကို။ုကက်ဆူပင်တေလြည်း စိုက်ခိုင်းပၝတယ်။ မိံစ်ြက ၂၀၀၆ကတည်းက ကဵမတိုႛက ရော်ဘာပင်တေကြို ပဵြိးထောင်ထာူးပီးတော့ ဒီိံစ်ြမြာ ဒၝတြေ စိုက်ူပီးခဵိန်ကဵကာမြ ၂၀၀၇ ခိုံစြ် ငၝးလပိုင်း ကုန်ခၝနီးကဵကာမြူမတ်မင်းကုမ္ထဏီက ဘြားခနဲ ပေၞလာူပီးတော့ ဒီေူမတေဟြာ သူတိုႛေူမ၊ သူတိုႛကို တိုင်းမြးက ခဵပေးထားတာ၊ ခင်ဗဵားတိုႛ နောက်ဆုတ်ပၝ ဆိုပီးတော့ ကဵမတိုႛကို အတင်းအဓမ္ထ တားတယ်။ နောက်္ဘမြိႛနယ်အဖြႛဲအစည်း မယက ဥက္ကဌတိုႛ အတငြ်းရေးမြးတိုႛကလည်း ခေၞူပီးတော့ ခင်ဗဵားတိုႛ ဖယ်ပေးမလား မဖယ်ပေးဘူးလား၊ မဖယ်ပေးရင် ခင်ဗဵားတိုႛကို အူပစ်ပေးမယ်၊ အရေးယူမယ်၊ တရားစဲမြယ် ဆိုပီး ကဵမတိုႛကို ကဵမတိုႛကို ဖယ်ခိုင်းပၝတယ်။ ကဵမတိုႛကလည်း ဒီေူမကို စိုက်ူပီးပဵြိူးပီးခဵိန်မြ ဆိုတော့ ဖယ်ပေးဖိုႛဆိုတာ ဘယ်လိုမြ ရင်မဆိုင်ရဲပၝဘူး၊ ကဵမတိုႛအတကြ် ကုန်ကဵစရိတ်တေကြလည်း သိန်း ၂၀၊ ၃၀ လောက်တော့ကုန်နေပၝူပီ၊ ရိတြာတေလြည်း ကုန်နေပၝူပီ။ သူတိုႛက လေဵာ်ေုကးပေးမယ်လိုႛရော မကမ်းလမြ်းဘူးလား။ လေဵာ်ေုကးကဵတော့လည်း ကဵမတစ်ယောက်တည်းတင် သိန်း ၃၀ လောက်ကုန်တာတောင်မြ တောင်သူသုံးဦးကို ၁၅ သိန်း လောက်နဲႛ ရြေႛနေက ညိတြာပၝ။ ဒၝတောင်မပြဲူမတ်မင်းကုမ္ထဏီက ဒၝရိုက်တာ မညြိပၝဘူး၊ အဲဒီလူက ဒေၞဋ္ဌကိင်ြဋ္ဌကိင်ြရဲႛ တူ လိုႛေူပာပၝတယ်။္ဘမြိႛနယ်အဖြႛဲအစည်းပေၝင်းစုံကလည်း သူတိုႛကိုယ်တိုင် လာခဵပေးတာတောင်မပြဲ တရားရုံးမြာ သက်သေထက်ြတော့ လာမခဵပၝဘူး တဲ့၊ စည်းဝေးပဲလြည်း မလုပ်ပၝဘူး တဲ့။ ကဵမတိုႛအနေနဲႛ တရြာလုံးလည်း သက်သေရိတြယ်၊ ဧည့်မတ်ြတမ်းမြာလည်း သက်သေရိပြၝတယ်။ သူတိုႛကတဲ့ အထက်က လူဋ္ဌကီးတေရြဲႛ ဖိအားကို မလန်ြဆန်ိုိံင်လိုႛ ကဵမတိုႛကို ဒီလိုလုပ်နေရတာပၝ တဲ့၊ ခင်ဗဵားတိုႛ တဲ့ အုတ်နံရံကို ခေၝင်းနဲႛမဆောင့်ပၝနဲႛ တဲ့၊ နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ပၝ တဲ့။ အဲဒၝကို ဘယ်သူကေူပာတာလဲခင်ဗဵ။ အဲဒၝ္ဘမြိႛနယ် အတငြ်းရေးမြး ဦးအေးငေရြော၊္ဘမြိႛနယ်အဖြႛဲအစည်း အကုန်လုံးကေူပာတာပၝ။ တရားသူဋ္ဌကီးကလည်း အကုန်လုံးေူပာပၝတယ်။ သူတိုႛက တဲ့ တောင်သူတြေ မနြ် မနြ်း သိပၝတယ် တဲ့။ တိုင်းမြးရဲႛအမိန်ႛေုကာင့် မလန်ြဆန်ိုိံင်လိုႛ ဒီလိုမဵြိး လုပ်ရတာပၝ တဲ့၊ ကဵမတိုႛကို ထောင်ခဵမယ် တဲ့၊ ဒီနေႛ ၂၀ ရက်နေႛမြာ အ္ဘပီး ထောင်ခဵရမယ်လိုႛ ကဵမတိုႛကိုေူပာပၝတယ်။ အဲဒၝေုကာင့် ကဵမတိုႛ ရုန်းရုန်း ရုန်းရုန်းနဲႛေူပးလာရပၝတယ်။ ဆရာမတိုႛကိုေူမခဵပေးတုန်းကရော အဲဒီမြာ ကုမ္ထဏီပိုင်တယ်တိုႛ ဘာတိုႛ မရိခြဲ့ဘူးလားခင်ဗဵ။ မရိပြၝဘူးရငြ့်၊ ရိရြင် ကဵမတိုႛကလည်း မလုပ်ပၝဘူး၊ ဘာသတင်းမြ မုကားခဲ့ပၝဘူး။ ကုမ္ထဏီကရော ဒီေူမကက်ြကို သူတိုႛ တော်တော်လေး လိုခဵင်နေတာလဲခင်ဗဵ။ ဒီေူမကက်ြဟာဆိုရင် ရန်ကုန်-မိံ္ဇလေး အဝေးေူပးလမ်းမ စီမံကိန်းလမ်းမဋ္ဌကီးနဲႛဆို ဘေးခဵင်းကပ်ူဖစ်နေပၝတယ်။ အဲဒၝေုကာင့် သူတိုႛက အကက်ြကောင်းတယ်ဆိုပီး ယူခဵင်တာလိုႛ ထင်တယ်။ ကဵမတိုႛကတော့ အဲသလောက်အထိ မတြေးမိပၝဘူး၊ ကဵမတိုႛက အိုစာမင်းစာအတက်ြပဲ လိုခဵင်တာပၝ။ တရားစဲဆြိုခံနေရတဲ့ ဒေၞတင်တင်မာေူပာခဲ့တာပၝ။ ဒီလယ်သမားတေရြဲႛအမကြို လိုက်ပၝဆောင်ရက်ြပေးနေတဲ့ ရြေႛနေ ဦးစန်းမောင်ကလည်း အမစြဲဆြိုခဵက်က သဘာဝမကဵဘူး လိုႛ အခုလို ဆိုလာပၝတယ်။ ကုမ္ထဏီက သူက ဒီလို၊ လယ်သမားတေဆြီမြာ ရိတြယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ သိပေမယ့် သူတိုႛက ဗဟိုေူမလတြ်ေူမရိုင်း ခဵပဲတြေကြို သူက လ္တွောက်တယ်။ လ္တွောက်တဲ့အခၝကဵတော့ တိုင်းေူမစာရင်းတိုႛဘာတိုႛက ခုနတုန်းက လယ်သမားတေကြို အသိမပေးဘဲနဲႛ ဒီလယ် ကင်းလတ်ြတယ်ဆိုပီး တင်လိုက်တယ်၊ တင်တဲ့အခၝကဵတော့ ကဵလာတဲ့အခၝကဵတော့ ကုမ္ထဏီက ဆီူးပီးတော့၊ ဒီမြာက လယ်သမားတေကြို လုပ်နေုကူပီ။ လုပ်တဲ့အခၝကဵတောိံ့တ်ြနဲႛ ဖယ်ခိုင်းတယ်။ ဖယ်ခိုင်းလိုႛ မရဘူး။ လယ်သမားတေကြ သူတိုႛလုပ်နေတာ ဘယ်ဖယ်ပေိးုိံင်မလဲူင်္ပံနာက။ အဲဒၝနဲႛ တရားစြဲုကတယ်။ တကယ့်တကယ် စဲမြယ်ဆိုရင်တော့ တရားမေုကာင်း စဲရြမြာပေၝ့၊ ရာဇ၀တ်ေုကာင်း ဆိုတာ သူမဵားလုပ်နေတဲ့ေူမကို အတင်းဝင်ူပီးလုမကြိုး။ အခုက လယ်သမားတေကြ လက်ရိပြဲ။ အဲဒၝကို သူတိုႛ တရားစဲတြာ။ လယ်သမား စုစုပေၝင်း ဘယ်ိံစ်ြယောက်ပၝလဲခင်ဗဵ။ အားလုံး ၁၃ ယောက်မြာ တရားစဲတြာ စုစုပေၝင်း ၃ ယောက်ပဲ စဲထြားတယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛ အဲသလို သူတိုႛက ၃ယောက်ကို ခြဲူပီးစဲတြာလဲဗဵ။ သူတိုႛက leading figureတေပြေၝ့၊ အရေးဋ္ဌကီးတဲ့ပုဂ္ဂိလ်ြတြေ၊ ဒီကောင်တေကြ ခေၝင်းမာတယ် ဆိုပီးတော့။ သူက ဒၝ ထိပ်ပိုင်းက္ဘိုဖိမြယ်ပေၝ့၊္ဘဖ္ဘြိပီး ထောင်ကဵသြားရင် သူတိုႛ ဒီေူမဋ္ဌကီးကို သိမ်းမယ် အလယ်ြတကူ။ ကဵနော်တိုႛကို အရေးယူမယ် ဘာညာဆိုတော့၊ ကဵနော်တိုႛက ခရိုင်ကို တက်လာူပီး၊ ရုံးေူပာင်းဖိုႛ၊ လ္တွောက်ဖိုႛ ကဵနော်တိုႛ လုပ်ူပီူးပီ။ လာမယ့် မန်းဒေးဆို ကဵနော်တိုႛ တင်ရုံပဲ ရိတြော့တယ်။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီးဦးကောဝိဒ အယ်လ်အေတငြ် ဟောုကားသည့် တရားတော် အူပည့်အစုံ အသံခြေ
သာသနမောဠိ ပဓာနာစေရ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီးဦးကောဝိဒ အယ်လ်အေတငြ် ဟောုကားသည့်တရားတော် အူပည့်အစုံ အသံခြေ နားဆင်ရန်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇
Reactions: Masoeyein Sayadaw at LA and his speech
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး ဦးကောဝိဒက သံဃာသပိတ်သည်ူမတ်စြာဘုရား ဟောုကားသည့် တရားတော်ိံငြ့် အညီူဖစ်သူဖင့် ဆက်လက် ကံဆောင်သြာုးကရန်ိံငြ့် လူထုကလည်း ၀ိုင်းဝန်း သပိတ်မြောက်ုကရန် အလေးအနက် တိုက်တနြ်းမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ သာသနမောဠိ ပဓာနစေရ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး ဦးကောဝိဒိံငြ့် အဖြဲႚ၀င် ဆရာတော်မဵား အစုံအညီူဖင့် အမေရိကန်ူပည် အနောက်ူခမ်း ခရီးစဉ် စခန်းသိမ်ုးသ၀ၝဒပေး တရားပြဲ ( လော့အိန်ဂဵလိူမြိႚ) ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ တငြ် အောင်ူမင်စြာ ကဵင်းပခဲ့သည်။ တရားပြဲတော်တငြ် ဆရာတော်ုကီးက သံဃာတော်တိုႚ၏ သပိတ်မြောက် ကံဆောင်မသြည် ဘုရားရငြ် ခဵမတ်ြပေးခဲ့သော တရားတော်ိံငြ့်အညီ ဆောင်ရက်ြခဵက်ူဖစ်ေုကာင်း၊ူပည်သူလူထုကလည်း သံဃာတော်မဵားကဲ့သိုႚ စည်းလုံးညီညတ်ြစြာူဖင့် စစ်အစိုးရိံငြ့် အပေၝင်းအပၝမဵားကို ဆက်လက် သပိတ်မြောက်ုကပၝက သာသနာ့အိံ္ဇရာယ်ုကီးမြ အလ္တွင်ူမန်ဆုံး လတြ်ေူမာက်ခဵမ်းသာုကမည်ူဖစ်ေုကာင်း အကဵယ်တ၀င့် ဟောုကားခဲ့ပၝသည်။ူပည်ပရောက်ူမန်မာူပည်သူအားလုံးကလည်း သံဃာတော်မဵာိးံငြ့်အတူ ၀ိုင်းဝန်း ထောက်ခုံကူပီး စည်းလုံးညီညတ်ြစြာူဖင့် သာသနာူပြူခင်ိးံငြ့် သာသနာကာကယ်ြစောင့်ရြောက်ရေး လုပ်ငန်းမဵားကို အားပေုးကရန် လိုေုကာင်း မိန်ႚုကားခဲ့သည်။ သက်တော် ၈၁ိံစြ် ရြိူပီူဖစ်သော ဆရာတော်ုကီးမြာ အိံစြ် ၅၀ ကေဵာ် တရားစာပေ သင်ုကားပိုႚခဵသော အာစရိယ ဆရာတော်ုကီး တပၝူးဖစ်သည့်အူပင် ပရိယတ္ဇိ ကဵမ်ူးပြ ဆရာတော်ုကီး တပၝူးဖစ်သည်။ိံစ်ြပေၝင်း ၅၀ အတငြ်း ဆရာတော်ုကီး အခဵိန်ယူပစြုတော်မူခဲ့သော ကဵမ်းစာအုပ် စုစုပေၝင်း ၅ အုပ် ( ၁၀ိံစ်ြလဵင် ၁ အုပ်ိံနြ်း)ူဖစ်ူပီး ထိုကဵမ်းစာအုပ်မဵားကို ကိုးကာူးပီး သံဃာတော်မဵားက ကဵက်မတြ် သင်ယူုကရသည်ူဖစ်၍ူမန်မာူပည်ရြိ သံဃာတော်မဵားမြာ ဆရာတော်ုကီိးံငြ့် ကင်းကြာသည်ဟု မဆိုိုံင်ပေ။ မိံ္ဇလေး မစိုးရိမ် စာသင်တိုက်ုကီး၏ ပဓာန နယက ဆရာတော်ုကီးအူဖစ်လည်း ဦးဆောင်မပြေးခဲ့သူဖင့် ယခိုံစြ် မစိုးရိမ်ိံစြ် ၁၀၀ူပည့် ပြဲတော်တငြ်ူပည်တငြ်းရြိ ကေဵာင်းနေ သံဃာတော်မဵား ဆရာတော်ုကီး ဓာတ်ပုံတော်ိံငြ့် ဆုံးမစာတိုႚကို ထင်ရြားစြာ ခဵိတ်ဆြဲပူဇော်ခဲု့ကသည်ကို ဆရာတော်ုကီးမြာ သတင်းတဆင့်ုကားရသူဖင့် မဵားစြိာံစ်ြသိမ့်ုကည်ိူံးေုကာင်း သိရသည်။ စစ်အစိုးရိံငြ့် အပေၝင်းအပၝမဵားကမူ ဆရာတော်ုကီးကို ၁၉၉၀ူပည့်ိံစ်ြတုံးက သံဃာတော်မဵား သပိတ်မြောက် ကံဆောင်သည်ကြိုိံမ်ိံငြ်းရန် အလိုႚငြာ ထောင်ဒဏ် ၃ိံစ်ြခဵမတြ်ူပီြးိံပ်စက်ခဲု့ကသည်။ ယခု ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာသပိတ် အရေးတော်ပုံတင်ြလည်း ဆရာတော်ုကီးသည်ူပည်ပသာသနာူပြ ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသိံငြ့် တကသြောူပည်ပရောက် ဆရာတော်မဵားကို အညီအညတြ် တခဲနက် စုဝေးလ္တွက်၊ သာသနမောဠိ - အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာူမန်မာ ရဟန်းတော်မဵား အဖြဲႚခဵပ်ြကို ဖြဲႚစည်ူးပီူးမန်မာူပည်၌ ကဵရောက်နေသော သာသနာ့ဘေးအိံ္ဇရာယ်အပေၝင်းကို စုပေၝင်းကာကယြ်ုကရန်ေုကာင့်ုကစိုက် ဆောင်ရက်ြတော်မူလဵက် ရြိသည်။ ထိုႚနေႚက ဆရာတော်အသီးသီးက မိန်ႚုကားသည့်ုသ၀ၝဒတရား အူပည့်အစုံကို သည်နေရာမြ နားဆင်ိုံင်ပၝူပီ။